ထက်နိုင်ဇော် – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com Covering Burma and Southeast Asia Sat, 06 Mar 2021 03:11:03 +0000 en-US hourly	1	https://wordpress.org/?v=5.7.1 https://burma.irrawaddy.com/wp-content/uploads/2021/05/cropped-irr_fav-32x32.png ထက်နိုင်ဇော် – ဧရာဝတီ https://burma.irrawaddy.com 32 32 နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အခြား အစိုးရ ဝန်ထမ်း ၁၁ ဦး ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ (ခ) တို့ဖြင့် တရားစွဲခံရ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/06/239042.html Sat, 06 Mar 2021 03:11:03 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=239042
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အစိုးရ ဝန်ထမ်း ၉ ဦး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ၁ ဦး၊ နေပြည်တော် မြန်မာ့ မီးရထားမှ ဒုရုံပိုင် ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁ တို့သည် အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှု(CDM)တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ
The post နိုင်ငံခြားရေးနှင့် အခြား အစိုးရ ဝန်ထမ်း ၁၁ ဦး ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ (ခ) တို့ဖြင့် တရားစွဲခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ အစိုးရ ဝန်ထမ်း ၉ ဦး၊ စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ၁ ဦး၊ နေပြည်တော် မြန်မာ့ မီးရ ထားမှ ဒုရုံပိုင် ၁ ဦး စုစုပေါင်း ၁၁ တို့သည် အာဏာဖီဆန်ရေး လှုပ်ရှားမှု(CDM)တွင် ပါဝင်ခဲ့သည်ဟုဆိုကာ နေပြည်တော် ဒက္ခိဏမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ပုဒ်မ ၅၀၅(က)၊ ၅၀၅(ခ)တို့ဖြင့် တရားစွဲခံထားရကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော် အချုပ်ထောင်တွင် ရောက်ရှိနေသည့် ၎င်းတို့ ၁၁ ဦးကို မနေ့က နေ့လယ်ပိုင်းက Video Conferencing စနစ် ဖြင့် ဒက္ခိဏမြို့နယ်တရားရုံးက ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ပြီး တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးသန်းလွင်ဆိုသူနှင့် အဖွဲ့က ရှေ့နေ လိုက်ခွင့် ရရှိခဲ့သည်။
“အမှုဖွင့်တဲ့ စွပ်စွဲချက်ကတော့ လူပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ အပေါ်မှာ Messenger ကနေတဆင့် သူတို့ရဲ့ အကောင့်တွေကနေပြီးတော့မှ နိုင်ငံ့ဝန်ထမ်းတွေနဲ့ တခြားဝန်ထမ်းတွေကို CDM လှုပ်ရှားမှုတွေမှာ ပါဝင်ဖို့ လှုံ့ဆော်တယ်ဆိုပြီး ရေးသားတာလို့ သိရ တယ်”ဟု တရား လွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးသန်းလွင်က သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
ထို့ပြင် အစိုးရဝန်ထမ်းများကို ကြောက်ရွံ့ ထိတ်လန့်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေရန်၊ အစိုးရ ဝန်ထမ်းများကို အုပ်ချုပ်မှု ယန္တရားများ ရပ်တန့်သွားစေရန် ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိဖြင့် သတင်းအမှားများ ပြောဆိုခဲ့သည်ဆိုသော စွပ်စွဲချက်များဖြင့် အမှု ဖွင့်လှစ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ထမ်း ၉ ဦးထဲတွင် မဖြိုးဖြိုးဝေ၊ မစုလဲ့ရီ၊ မသူသူအောင်၊ ကိုအောင်ဇင်ထက်၊ မသဲဆုထွန်း၊ မသဲသဲလှတို့ ၆ ဦးမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)ဖြင့် လည်းကောင်း၊ ကိုသက်ထူးအောင်၊ မခင်မာအောင်၊ မဆုပြည့်ပြည့်ဖြိုးတို့ ၃ ဦးမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ဖြင့် လည်းကောင်း အမှုဖွင့်ခံထားရသည်။
စီမံကိန်းနှင့် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနမှ မသဉ္ဇာဝင်းမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ)ဖြင့် လည်းကောင်း၊ မြန်မာ့မီးရထားမှ လယ်ဝေးမြို့နယ် ဒုရုံပိုင် ကိုစိုင်းမင်းထွေးမှာ ပုဒ်မ ၅၀၅(က)ဖြင့် လည်းကောင်း အမှုဖွင့် ခံထားရသည်။
မနေ့က နေပြည်တော် ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ပြုလုပ်သည့် ရုံးချိန်းသို့ ၎င်းတို့၏ မိသားစုဝင်များ၊ အစိုးရဝန်ထမ်း လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များ လာရောက်ခဲ့ကြသော်လည်း Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ရုံးထုတ်သည့် နေရာသို့ ရှေ့နေတချို့ သာ ဝင်ခွင့်ရပြီး အခြားသူများ ဝင်ရောက်ခွင့် မရခဲ့ကြပေ။
၎င်းတို့အားလုံးသည် CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သည်ဟုဆိုကာ ရုံးမတက်တော့ဘဲ တပ်ကုန်းမြို့နယ်ထဲသို့ တိမ်းရှောင်နေစဉ် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၈ ရက်နေ့ မနက် ၄ နာရီခွဲခန့်တွင် အတူ အဖမ်းခံခဲ့ရသော်လည်း မတူညီသည့် ပုဒ်မများတပ်၍ အရေး ယူခံခဲရခြင်း ဖြစ်သည်။
ရှေ့နေ ဦးသန်းလွင် ရှင်းပြသည်မှာ စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီး ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေကို ပြင်ဆင်ပြီး နောက်ပိုင်းမှ အမှု ကျူးလွန်သည် စွပ်စွဲချက်ဖြင့် အစိုးရဝန်ထမ်း တချို့မှာ ပုဒ်မ ၅၀၅(က) ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံရခြင်းဟု သိရကြောင်း ပြောသည်။
ပုဒ်မ ၅၀၅ (က)မှာ ထောင်ဒဏ် ၃ နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်ပြီး ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)မှာ ထောင်ဒဏ် ၂ နှစ်အထိ ဖြစ်စေ၊ ငွေဒဏ်ဖြစ်စေ ချမှတ်နိုင်သည်။
“ရုံးချိန်းကိုတော့ ၁၅ ရက် ၃ လ ၂၀၂၁ ကို ချိန်းဆိုထားပါတယ်။ အဲဒီနေ့မှာ ဘာလုပ်မလဲဆိုရင် မှုခင်းစီမံခန့်ခွဲမှု CMP ကို အကြိုညှိနှိုင်း လုပ်ပါမယ်။ ဘယ်နေ့မှာ ဘယ်သူတွေကို ဘယ်လို စစ်ဆေးမလဲဆိုတာကို သက်ဆိုင်ရာအမှုစစ် မြို့နယ် တ ရားသူကြီးနဲ့ ညှိနှိုင်းပြီးတော့မှပဲ ဒီအမှုကို ဆက်လက် စစ်ဆေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရှေ့နေ ဦးသန်းလွင်က ပြောသည်။
အစိုးရဝန်ထမ်း ၁၁ ဦးကို တရားလိုပြုလုပ်၍ တရားစွဲဆိုသူမှာ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် စခန်းမှူး ဒုရဲမှူး အေးစိုး ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းအစိုးရ ဝန်ထမ်း ၁၁ ဦးနှင့်အတူ နေပြည်တော်တွင် နေထိုင်သည့် ကိုဟန်ဝေဆက် ဆိုသူမှာလည်း Facebook Group တခုမှတဆင့် CDM တွင် ပါဝင်သည့် ဝန်ထမ်းများကို နေထိုင်စားသောက်ရေးအတွက် ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမည်ဟု တင်ခဲ့ သဖြင့် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)ဖြင့် တရားစွဲခံခဲ့ရသည်။
“အစိုးရဝန်ထမ်းတွေကို ပြစ်မှု ကျူးလွန်စေဖို့အတွက် မမှန်သတင်းတွေကို ဖြန့်ဝေတယ်။ သွေးထိုးလှုံဆော်တယ် ဆိုပြီး တော့ တရားစွဲဆိုတာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ရှေ့နေ ဦးသန်းလွင်က ပြောသည်။
ကိုဟန်ဝေဆက်ကို တရားလိုပြုလုပ်၍ တရားစွဲဆိုသူမှာ ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူး ရဲမှူး လှထွန်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
ထို့ကြောင့် ယခု အမှုတွဲတွင် စုစုပေါင်း ၁၁ ဦး ပါဝင်ပြီး နောက်ရုံးချိန်းများကို မတ်လ ၁၅ ရက်၊ ၁၇ ရက်နှင့် ၁၉ ရက်နေ့များ တွင် ပြုလုပ်သွားမည်ဟု သိရသည်။
ယခုလို တရားရင်ဆိုင်နေရသူများထဲတွင် လယ်ဝေးမြို့နယ် ဒုရုံပိုင် ကိုစိုင်းမင်းထွေး ၁ ဦးသာ အသက် ၃၀ ရှိသူ ဖြစ်ပြီး ကျန်သူများထဲတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်း မသဲဆုထွန်းမှာ အသက် ၂၄ နှစ်သာ ရှိသေးသည်။ ကျန်ရှိသူများမှာလည်း အသက် ၂၅နှစ်၊ ၂၆ နှစ်၊ ၂၇ နှစ်နှင့် ၂၈ နှစ် အရွယ်များသာ ရှိကြသေးသည်။
]]> ဦးဝင်းထိန်ကို အာမခံပေးရန် သင့်၊ မသင့် ရှေ့လာမည့် ရုံးချိန်းတွင် ဆုံးဖြတ်မည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/05/239007.html Fri, 05 Mar 2021 09:48:09 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=239007
နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) နာယက ဦးဝင်းထိန်ကို အာမခံပေးရန် သင့်၊ မသင့် လာမည့် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ဒက္ခိဏခရိုင် တရား ရုံးက ဆုံးဖြတ်မည် ဖြစ်ကြောင်း
The post ဦးဝင်းထိန်ကို အာမခံပေးရန် သင့်၊ မသင့် ရှေ့လာမည့် ရုံးချိန်းတွင် ဆုံးဖြတ်မည် appeared first on ဧရာဝတီ.
နိုင်ငံတော် အကြည်ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က)ဖြင့် အမှုဖွင့်ခံထားရသည့် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ချုပ် (NLD) နာ ယက ဦးဝင်းထိန်ကို အာမခံပေးရန် သင့်၊ မသင့် လာမည့် မတ်လ ၁၉ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ဒက္ခိဏခရိုင် တရားရုံးက ဆုံး ဖြတ်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“တရားသူကြီးရဲ့ ဆင်ခြေတုံတရားအရ အမိန့်တရပ်ချပေးဖို့ပဲ လျှောက်ထားတာပါ။ အာမခံမပေးသင့်ဘူးလို့ ကန့်ကွက်တာတော့ မရှိပါဘူး။ နောက်ရုံးချိန်းမှာတော့ အာမခံ ပေးသင့်၊ မပေးသင့်နဲ့ ပတ်သက်ပြီး တရားရုံးတော်ကနေပြီး အမိန့်တရပ် ချမှတ်ပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်”ဟု ဦးဝင်းထိန်၏ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဒေါ်မင်းမင်းစိုးက ပြောသည်။
ဦးဝင်းထိန်သည် အသက် ၈၀ ရှိနေပြီ ဖြစ်ပြီး Wheel Chair ဖြင့် သွားလာနေရသူတဦး ဖြစ်ကြောင်း၊ အသက်ရှုရပ်သည့် ရောဂါကြောင့် အောက်စီဂျင် မပြတ် သွင်းနေရကြောင်း၊ သွေးတိုး၊ ဆီးချို၊ နှလုံကြီး၊ ဆီးကြိတ်ကြီး ရောဂါများ ခံစားနေရ သဖြင့် ကျန်းမာရေးအရ အာမခံ လျှောက်ထားရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့ နေဖြစ်သူက သတင်းထောက်များကို ရှင်းပြသည်။
ဦးဝင်းထိန် အာမခံ ရရှိရန် လျှောင်ထားသည့် ပုဒ်မမှာ ပုဒ်မ ၄၉၇-၁ ဖြစ်ပြီး အာမခံ မပေးနိုင်သော ပုဒ်မများအတွက် အာမ ခံ ရရှိအောင် ဆောင်ရွက်နိုင်သည့် ပုဒ်မတခု ဖြစ်သည်။
Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ရုံးထုတ်ခဲ့သည့် ယနေ့ ရုံးချိန်းတွင် ဦးဝင်းထိန်သည် ရှေ့နေငှားရမ်းခွင့် ရရှိခဲ့သော်လည်း ၎င်း၏ ရှေ့နေများနှင့် နေပြည်တော် အချုပ်ထောင်တွင် တွေ့ဆုံခွင့် မရခဲ့ပေ။
ဦးဝင်းထိန် အမှုကို အများပြည်သူ ရှေ့မှောက်တွင် တရားစီရင်ခွင့်ပြုပေးရန်လည်း ရှေ့နေများဘက်မှ တောင်းဆိုခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
]]> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့နေငှားခွင့်ရမှ အမှုစစ်ဖို့ တရားရုံး ဆုံးဖြတ် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/03/01/238781.html Mon, 01 Mar 2021 11:41:29 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=238781
အမှု ၄ မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် အမှု အတွက် ရှေ့နေ ငှားရမ်းခွင့် ရရှိမှသာ အမှုကို ဆက်လက် စစ်ဆေးရန် နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့ နယ် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း
The post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ရှေ့နေငှားခွင့်ရမှ အမှုစစ်ဖို့ တရားရုံး ဆုံးဖြတ် appeared first on ဧရာဝတီ.
အမှု ၄ မှုဖြင့် စွပ်စွဲခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အနေဖြင့် ၎င်းရင်ဆိုင်နေရသည့် အမှုများအတွက် ရှေ့နေ ငှားရမ်းခွင့် ရရှိမှသာ အမှုကို ဆက်လက် စစ်ဆေးရန် နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့ နယ် တရားရုံးက ဆုံးဖြတ်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေဖြစ်သူ ဦးခင်မောင်ဇော်သည် ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ပထမဆုံး ရုံးချိန်း ပြီးသည့်နေ့ကပင် ရှေ့နေပါဝါ ရရှိရန် ကြိုးစားခဲ့သော်လည်း ယနေ့ မတ်လ ၁ ရက်နေ့ ရုံးချိန်းအထိ ရှေ့ နေ ပါဝါ မရရှိသေး ပေ။
“သူ(ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်)က ရှေ့နေနဲ့ ထုချေမယ်လို့ ပြောထားတဲ့အတွက် ရှေ့နေ ပါမလာမချင်းကို ကျမတို့က ဘာမှ ရှေ့ ဆက်ပြီး ဆောင်ရွက်မှာ မဟုတ်ဘူး။ ရှေ့နေပါလာတဲ့အထိကို ရုံးက ခွင့်ပြုပေးထားတယ်”ဟု ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တွဲဖက် တရားသူကြီး ဒေါ်နန်းအေးမြသီရိက ပြောသည်။
ထို့ပြင် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၆၇ ၊ နိုင်ငံတော် အကြည် ညိုပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ)တို့ဖြင့် အမှု ၂ မှု ထပ်တိုး ဖွင့်လာကြောင်း ယင်းတရားရုံး၏ ပြန်ကြားရေး အရာရှိလည်း ဖြစ်သူ ၎င်းက ပြောသည်။
ဆက်သွယ်ရေး ဥပဒေပုဒ်မ ၆၇ ဖြင့် အမှုဖွင့်ရခြင်းမှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံတွင် တရားမဝင် တင်သွင်းထားသည့် စကားပြောစက်များ တွေ့ ရှိခဲ့သဖြင့် ဖြစ်ပြီး နေပြည်တော်မှ ရဲမှူး ကြည်လင်ဆိုသူက တရားလို ပြုလုပ်ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
အခြား အမှုတခု ဖြစ်သည့် ပုဒ်မ ၅၀၅(ခ) မှာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ NLD ပါတီ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့က စာ ၂ စောင်ကို ကုလသမဂ္ဂနှင့် နိုင်ငံ တကာ သံရုံးများထံ ပေးပို့ခဲ့သဖြင့် ယင်းစာများသည် နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝတ်ပိပြားရေးကို ထိခိုက်သည်ဟုဆိုကာ ဒက္ခိဏခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူးက တရားလို ပြုလုပ်ပြီး တရားစွဲဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
“၁၅ ရက်နေ့ကို အမှုအကုန်လုံးကို ချိန်းဆိုထားတယ်”ဟု တရားရုံး ပြန်ကြားရေးအရာရှိ ဒေါ်နန်းအေးမြသီရိက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို စစ်ဆေးနေသည့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့ နယ် တရားရုံး (ဓာတ်ပုံ – သီဟလွင်/ဧရာဝတီ)
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ယခုပုဒ်မ ၂ ခု မတိုင်မီ ပြီးခဲ့သည့် ရုံးချိန်းက သဘာဝ ဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅၊ပို့ကုန်သွင်းကုန် ပုဒ်မ ၈ တို့ဖြင့် အမှုဖွင့် တရားစွဲဆိုထားပြီး ဖြစ်သဖြင့် စုစုပေါင်း အမှု ၄ မှုနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
ယနေ့ ရုံးချိန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ရှေ့နေများနှင့် တွေ့ချင်သည်ဟု ပြောသဖြင့် မြို့နယ် တရားသူကြီးက ရဲတပ်ဖွဲ့ ကို စီစဉ်ပေးလိုက်ပါဟု ညွှန်ကြားခဲ့ကြောင်း၊ တရားရုံးက ညွှန်ကြားချက်သာ ပေးနိုင်ပြီး လက်တွေ့ တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့က ရှေ့နေ ပါဝါ ရရှိရန် မကူညီကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
“တရားစွဲဆိုခံရတဲ့သူက ဥပဒေနဲ့အညီ သူ့ရဲ့ရပိုင်ခွင့်တွေကို ဆောင်ရွက်ပေးရမယ်ဆိုတဲ့ မူတွေကို အခုထိ အဲဒီ အခွင့် အ ရေးတွေမရဘဲနဲ့ တရားမျှတတဲ့ ရင်ဆိုင်မှု အခွင့်အရေး ဆုံးရှုံးနေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အားလုံးကို တင်ပြချင်ပါတယ်” ဟု ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်၍ “ကျနော်တို့ကတော့ ရှေ့နေပါဝါ မတင်ရတဲ့ အနေအထား။ တရားရုံးကလည်း ရှေ့နေမပါရင် ဆက်မလုပ်ဘူး ဆိုတဲ့ ပုံစံမျိုးပဲ။ ဒီဟာကြီးကို ဒီအတိုင်းဆွဲနေရင် အချိန်ကြာနေတာပဲဖြစ်မှာ။ အဲဒီနစ်နာမှုတွေဟာ ကာယကံရှင်တွေ အ ပေါ်မှာ . . . ဒါပြီးတော့ ဒီဟာက အစဉ်အလာကြီး ဖြစ်သွားရင် ဒါမကောင်းဘူး။ လူတိုင်းအတွက် အစဉ်အလာကြီး ဖြစ်သွားမယ်”ဟု ပြောသည်။
ယနေ့ ရုံးချိန်းတွင် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို ပုဒ်မ ၂ ခု ထပ်တိုးသည့် နည်းတူ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကိုလည်း ပုဒ်မ ၅၀၅ (ခ) တမှု ထပ်တိုးခဲ့ကြောင်း၊ ထို့ပြင် နေပြည်တော် ကောင်စီ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာမျိုးအောင်ကိုလည်း ပုဒ် ၅၀၅ (ခ)ဖြင့် အမှုဖွင့် လိုက်ကြောင်း ရှေ့နေများထံမှ သိရသည်။
တရားရုံး ရုံးချိန်းများသို့ သတင်းထောက်များကို ဝင်ခွင့် မပြုနိုင်သေးကြောင်း၊ သို့သော် တရားရုံး စစ်ဆေးမှုများ အပြီးတွင်
အပတ်စဉ် သတင်းထုတ်ပြန်ပေးမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဦးဆောင်သည့် NLD ပါတီကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ခေါ်ယူခွင့် မပေးတော့ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများ ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုကာ လက်ရှိ အစိုးရထံမှ နိုင်ငံတော် အာဏာကို တပ်မတော်က ရယူထားသည်။
ယာယီသမ္မတအဖြစ် ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဒုတိယ သမ္မတ ဦးမြင့်ဆွေကို တာဝန်ပေးထားပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က နိုင်ငံတော် စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီ ဥက္ကဌအဖြစ် နိုင်ငံတော် အာဏာကို ထိန်းချုပ်ထားသည်။
စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို လက်မခံဘဲ ဆန္ဒပြသူများကိုလည်း စစ်တပ်နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့တို့က အင်အားသုံး အကြမ်းဖက် ဖြိုခွင်း မှုများကို တနိုင်ငံလုံးတွင် ပြုလုပ်လျက်ရှိသည်။
]]> ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေအဖြစ် ပါဝါတင်ခွင့် ယနေ့အထိ မရသေး https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/25/238570.html Thu, 25 Feb 2021 09:25:44 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=238570
ပုဒ်မ ၂ ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် အတွက် ရှေ့နေလိုက်ပေးရန် ကြိုးစားနေသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်မပြုသဖြင့် ရှေ့နေပါဝါ တင်ခွင့် ယနေ့ အချိန်အထိ မရသေးကြောင်း
The post ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေအဖြစ် ပါဝါတင်ခွင့် ယနေ့အထိ မရသေး appeared first on ဧရာဝတီ.
ပုဒ်မ ၂ ခုဖြင့် တရားစွဲဆိုခြင်း ခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အတွက် ရှေ့နေ လိုက် ပေးရန် ကြိုးစားနေသော်လည်း သက်ဆိုင်ရာ ခွင့်မပြုသဖြင့် ရှေ့နေပါဝါ တင်ခွင့် ယနေ့ အချိန်အထိ မရသေးကြောင်း ပျဉ်း မနားမြို့ မှ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ၊ သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပ ဒေပုဒ်မတို့ဖြင့် တရားစွဲခံထားရကြောင်း ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံး က ထုတ်ဖော် ပြောဆိုခဲ့သည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က ၎င်းအမှုအတွက် ရှေ့နေကို NLD ပါတီက တာဝန်ပေးသူကို လက်ခံမည် ဖြစ်ကြောင်း ယင်းနေ့ က ပြောဆိုသဖြင့် NLD ပါတီမှ တာဝန်ပေးထားသူ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ရှေ့နေပါဝါ (ရှေ့နေ ကိုယ် စားလှယ်လွှဲစာ) ရရှိရန် ကြိုးစားနေခြင်း ဖြစ်သည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က Video Conferencing စနစ်ဖြင့် လုပ်သည့် တရားရုံး စစ်ဆေးမှုတွင် ဒေါ်အောင်
ဆန်းစုကြည်ထံမှ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ရရှိရန် မြို့နယ် တရားသူကြီးက ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးက ဆောင်ရွက်ပေးလိုက် ပါဟု ပြောဆိုသဖြင့် ယင်းရဲအရာရှိမှတဆင့် ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ရရှိရန် ကြိုးပမ်းနေခြင်း ဖြစ်သည်။
“မြို့နယ် ရဲတပ်ဖွဲ့ မှူးကလည်း အထက်လူကြီးတွေကနေတဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ဆီကို ပို့ပြီးတော့ လက်မှတ်ထိုးဖို့ လုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ ပြောပါတယ်။ အခုထိ မရသေးဘူး”ဟု တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က နေပြည် တော်တွင် သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
ထို့ပြင် အမှုသည်ဖြစ်သူ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နှင့် တွေ့ ဆုံခွင့် ရရှိရန်လည်း သက်ဆိုင်ရာသို့ စာဖြင့် သီးခြား တောင်းဆို ထားကြောင်း သိရသည်။
“ရှေ့နေနဲ့ အမှုသည်ကတော့ တွေ့ကိုတွေ့ ရမှာ။ သူ့အမှုကို စပြီးတော့ မကိုင်တွယ်ခင်မှာ ရှေ့နေတယောက်အနေနဲ့ အမှု သည်ရဲ့ Instruction လို့ ခေါ်တဲ့ ညွှန်ကြားချက်ကို ယူကို ယူရမှာ။ အဲဒါတွေ ရဖို့အတွက် ကျနော်တို့ လျှောက်လွှာလည်း တင်တယ်။ ရဲကို တဆင့်ပေးတယ်”ဟု ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။
ရှေ့နေကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ ရရှိရန် နေ့စဉ် ကြိုးစားနေပြီး အကယ်၍ လာမည့် မတ်လ ၁ ရက်နေ့တွင် ပြုလုပ်မည့် နောက် ရုံးချိန်းအထိ မရရှိပါက ရှေ့နေများ အနေဖြင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုတွဲ လေ့လာခွင့်၊ တရားရုံး စစ်ဆေးမှုတွင် တရားလို ဘက်သို့ မေးမြန်းခွင့်များ ဆုံးရှုံးရမည် ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေများဘက်က ပြောသည်။
ဦးခင်မောင်ဇော်က“စွပ်စွဲခံရတဲ့သူအနေနဲ့အခွင့်အရေးတွေ ဆုံးရှုံးသွားမှာကို ကျနော်တို့အင်မတန် စိုးရိမ်တယ်ဗျ။ ဘာလို့ လဲဆိုတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်စားလှယ်လွှဲစာ တင်ပြီးမှ တရားရုံးကလည်းပဲ ရှေ့ နေတယောက်အနေနဲ့အမှုတွဲတွေကို လေ့လာ ခွင့်ပေးမယ်။ အဲဒီ အမှုတွဲတွေ နှစ်မှုစလုံးပေါ့။ အခုထိ မဖတ်ရသေးဘူး။ မသိရသေးဘူး”ဟု ပြောသည်။
နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်တို့ အမှုအတွက် ဥပဒေကြောင်းအရ ကြိုးစား နေသည်မှာ ရှေ့နေများဘက်မှ မှန်သော်လည် ၎င်းတို့ ၂ ဦးစလုံးသည် အပြစ်မရှိဘဲ စွပ်စွဲခံရသူများ ဖြစ်၍ ခြွင်းချက်မရှိ လွှတ်ပေးရန်သာ ပြောလိုကြောင်း နေပြည်တော် NLD ခရိုင် ဥက္ကဌ ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
“ကျနော်တို့ ခေါင်းဆောင်တွေကို အကြောင်းရှာပြီး ဖမ်းထားတာ။ ခေါင်းဆောင်တွေ ပြန်လွှတ်ပေးဖို့ ရနိုင်တဲ့ နည်းလမ်း တွေကို အကုန်ကျင့်သုံးသွားမှာပဲ။ ဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာ အရလည်း လုပ်နေတယ်။ ပြည်သူတွေ လိုချင်နေတာ ခေါင်းဆောင် တွေ အားလုံး လွှတ်ပေးရေးပဲ”ဟု ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ကို တရားရုံးသို့ စွဲတင်ခံရသည့် ပုဒ်မ ၂ ခုအနက် တခုမှာ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က မဲဆွယ်သည့် ကားယာဉ်တန်းတခုကို ထွက်၍ လက်ပြနုတ်ဆက်သည့်အတွက် သဘာဝ ဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ ဖြင့် အရေးယူခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
နောက်ပုဒ်မတခုမှာ နေအိမ်တွင် စကားပြောစက်များ တရားမဝင် တင်သွင်းထားသည်ဟု ဆိုကာ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ပုဒ်မ ၈ ဖြင့် အမှုဖွင်၍ တရားရုံးသို့ တင်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံးက အတည်ပြုထားသည်။
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်ကိုမူ ရွေးကောက်ပွဲအကြိုကာလ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ အောက်တိုဘာလ ၁၉ ရက်နေ့က မဲဆွယ်သည့် ကား ယာဉ်တန်းတခုကို ထွက်၍ လက်ပြနုတ်ဆက်သည့်အတွက် သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ခန့်ခွဲမှု ဥပဒေ ပုဒ်မ ၂၅ ဖြင့် တရားရုံး တင်ထားခြင်း ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်က ၎င်းကိုယ်တိုင်လည်း ဥပဒေသမား၊ ရှေ့နေတဦး ဖြစ်သဖြင့် ယခုအမှုကို ကိုယ်တိုင် ထုချေမည်ဟု ယနေ့ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ပြုလုပ်သည့် ရုံးချိန်းတွင် ပြောဆိုသည်ဟု သိရသည်။
တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းထားခြင်း ဖြစ်သည်။
]]> စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သဖြင့် နေပြည်တော်တွင် တရက်တည်း လူပေါင်း ၂၀၀ ခန့် အဖမ်းခံရ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/23/238450.html Tue, 23 Feb 2021 07:31:01 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=238450
နေပြည်တော် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးကြီးတဦးကမူ ဖမ်းဆီးထားသူ ၁၈၀ ကျော်ကို ယခုနာရီပိုင်းအတွင်း ပြန်လွှတ် ပေးမည် ဖြစ် ကြောင်း၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ယင်းမိသားစုဝင်များမှာလည်း နေပြည် တော်ရှိ ရဲတပ်ရင်းတခု အနီးတွင် လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း
The post စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင်သဖြင့် နေပြည်တော်တွင် တရက်တည်း လူပေါင်း ၂၀၀ ခန့် အဖမ်းခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
နေပြည်တော်တွင် ၂ ငါးလုံး လူထု လှုပ်ရှားမှုအဖြစ် “နွေဦးတော်လှန်ရေး” ခေါင်းစဉ်ဖြင့် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို ဆန့်ကျင် သည့် လူများ၏ သိန်းနှင့်ချီ စုဝေးမှုကို စစ်တပ်နှင့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ဝင်များက ယမန်နေ့က အင်အားသုံး ဖြိုးခွင်းခဲ့ရာ အနည်းဆုံး လူ ၂၀၀ ခန့် အဖမ်းခံခဲ့ရကြောင်း ပျဉ်းမနားမြို့နယ် NLD ပါတီ အတွင်းရေးမှူး ဦးဝင်းနိုင်ဦးက ပြောသည်။
ဆန္ဒပြသူများသည် နံနက် ၁၀ နာရီခန့်တွင် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့ ၊ နှင်းဆီပန်းအဝိုင်း ရာဇဌာနီလမ်းမကြီးသို့ လာ ရောက်စုဝေးကြပြီး ပျဉ်းမနားမြို့ထဲသို့ ပြန်အထွက် ၁၁ နာရီခန့်တွင် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ဝင်များက အင်အားသုံး လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
ပျဉ်းမနား နှင်းဆီပန်းအဝိုင်းတွင် လူစုကွဲသွားသော ဆန္ဒပြသူများကို ရန်ကုန်-မန္တလေးလမ်းဟောင်း ရွာကောက်ရပ်ကွက်၊ ၈၅ တပ်အနီး၊ ပျဉ်းမနား-တောင်ညိုလမ်း နေပြည်တော်ဘက်သို့ အတက်လမ်းအားလုံးနှင့် ဇီဇဝါ အဝိုင်းတို့ကို ရဲနှင့် စစ်တပ်တို့ ပူးပေါင်းထားသည့် လုံခြုံရေး တပ်ဖွဲ့ ဝင်များက ပိတ်ဆို့၍ လိုက်လံ ဖမ်းဆီးခဲ့ခြင်းလည်း ဖြစ်သည်။
မနေ့က နံနက်ပိုင်းမှ စတင်ပြီး နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် ၂ ငါးလုံး လူထုလှုပ်ရှားမှုအဖြစ် လမ်းလျှောက် စစ် ကြောင်းများ၊ မော်တော်ဆိုင်ကယ်၊ မော်တော်ကားများဖြင့် လူအုပ်ကြီးသည် စစ်အာဏာသိမ်းမှုကို အလိုမရှိကြောင်း ဆန့်ကျင် ဆန္ဒပြစဉ် အထက်ပါအတိုင်း အဖမ်းခံရခြင်း ဖြစ်သည်။
“အဖမ်းခံရတဲ့သူက စာရင်းအရဆိုရင် လူပေါင်း ၁၉၀ ကျော်တယ်။ ၂၀၀ နီးပါးပေါ့။ တချို့ကတော့ ပြန်လွှတ်တယ်။ ငယ် သေးလို့ ၁၈ နှစ်အောက်တွေကိုတော့ ပြန်လွှတ်တဲ့ သဘောပါ။ တော်တော်များများ ကျန်တယ်။ မနေ့က ညနေ ၆ နာရီ လောက်မှာ ၁၈ နှစ်အောက် လူ ၂၀ လောက် ပြန်လွတ်လာတယ်”ဟု ပျဉ်းမနားမြို့နယ် NLD ပါတီ အတွင်းရေးမှူးဦးဝင်းနိုင်ဦးက ပြောသည်။
အဖမ်းခံရသူများတွင် အမျိုးသမီးငယ်နှင့် လူငယ် အများစု ပါဝင်ကြောင်း၊ လူများသာမက မော်တော်ဆိုင်ကယ် အစီး ၃၀၀၊ ကား ၈ စီးတို့လည်း အဖမ်းခံရကြောင်း ပျဉ်းမနားမှ သတင်းရင်းမြစ်များက ပြောသည်။
“ဆန္ဒပြတဲ့သူတွေကို ဖြိုခွင်းတော့မယ်ဆိုရင် ကြိုသတိပေးရတယ်လေ။ ကြိုသတိမပေးဘူး။ ချက်ချင်းဝင်တယ်။ ပြန်ကျဲနေ တဲ့ သူတွေကို ကောက်သင်းကောက် ကောက်တယ်။ ထမင်းထုတ်ဝေတဲ့သူ ရေသန့်ဘူးဝေတဲ့ လူပါမကျန် အကုန်ဖမ်း တယ်။ မိသားစုလိုက်ပါ ပါသွားတာ”ဟု ဦးဝင်းနိုင်ဦးက ဆက်ပြောသည်။
ပျဉ်းမနားမြို့နယ်တွင် အဖမ်းအဆီးများကြောင့် လူစုကွဲလာသည့် ဆိုင်ကယ်နှင့် မော်တော်ယာဉ်ဖြင့် ဆန္ဒပြသူများသည် နေ ပြည်တော်ဘက်သို့ ရောက်ရှိလာပြီး MICC –2အနီး ဆွာလမ်းဆုံ၊ ဝဏ္ဏသိဒ္ဓိ ဘောလုံးကွင်းရှေ့သို့ အရောက် နေ့လယ် ၁ နာရီခန့်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် မော်တော်ယာဉ်များဖြင့် ရောက်ရှိလာသဖြင့် နောက်ပြန်လှည့်စဉ် မလွတ်တော့ကြောင်း ယင်းဖြစ် စဉ်ကို ကြုံတွေ့ ခဲ့ရသူ ကိုကျော်ကျော်က ပြောပြသည်။
“ပြန်လှည့်တဲ့အချိန် နောက်နဲ့ ဘေးမှာ ဘယ်အချိန်က ရဲတွေ ရောက်နေမှန်း မသိဘူး။ အကုန်ညှပ်ပြီး ဖမ်းလိုက်တာ။ ညှပ် ပြီး ရိုက်ပြီးတော့ ဖမ်းတာ။ ကျနော်တို့လည်း ပြေးတာပေါ့နော်။ နိုင်ငံဝန်ထမ်း အငြိမ်းစားအိမ်ရာက အလုပ်သမား တန်းလျား တွေထဲ ပြေးတာ။ အလုပ်သမားတန်းလျားတွေက ကွယ်ပေးထားလို့ လွတ်တာ။ ကျန်တဲ့ ပိတ်မိနေတဲ့လူတွေ တေယ်တော် များများက အကုန်မိတယ်။ ကျနော့် အမဝမ်းကွဲနှစ်ယောက်လည်း ပါသွားတာပေါ့”ဟု ကိုကျော်ကျော်က ပြောသည်။
၎င်းတနေရာထဲတွင် အနည်းဆုံး လူ ၂၀၀ ခန့် အဖမ်းခံရမည်ဟု ထင်ကြောင်း၊ ဆိုင်ကယ်များလည်း အဖမ်းခံခဲ့ရပြီး တချို့ မှာ ကြောက်ကြောက်နှင့် တောထဲသို့ ဆင်းပြေးပြီး မနေ့က ညနေပိုင်းမှ ပြန်ရောက်သူ၊ ယနေ့ မနက် မိုးလင်းမှ တောထဲက ပြန်ထွက်လာသူများပင် ရှိကြောင်း သိရသည်။
“နောက်က အတင်းလိုက်ဆွဲတာ။ ပြေးနေရင်း နောက်က အကျီဆွဲပြီး ရိုက်တယ်။ သူတို့ဒိုင်းနဲ့ ဆောင့်တွန်းပြီး ဖမ်းတာ ရှိတယ်။ ပြေးနေတာကို ဒိုင်းနဲ့ ဆောင့်တွန်းလိုက်တော့ ဟပ်ထိုးလဲတာပေါ့နော်။ အဲဒီကျတော့မှ ဖမ်းတာတွေရှိတယ်”ဟု ကိုကျော်ကျော်က ပြောပြသည်။
နေပြည်တော်က ပရဟိတ လူမှုကူညီရေးအသင်းတခုမှ တာဝန်ရှိသူတဦးကလည်း နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား နှင်းဆီပန်း အဝိုင်းအနီးတွင် လူများသဖြင့် Medical Cover ပြုလုပ်နိုင်ရန် စောင့်ဆိုင်းနေစဉ် လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ ဝင်များ ရောက်ရှိလာပြီး အင်အားသုံး နှိမ်နင်းသဖြင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို အကူအညီပေးနိုင်ရန် ကြိုးစားသော်လည်း မအောင်မြင်ကြောင်း ပြောသည်။
“လူနာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ medical cover သွားပြီး ပေးမယ်ဆိုပြီး သွားကောက်တဲ့အချိန်မှာ ကျနော်တို့ကား ကိုလည်း နှစ်ပွင့်နဲ့ရဲက ကန်သွားတယ်။ နောက်ပြီး ကျနော်တို့ ကလေးတွေကိုလည်း ကန်သွားတယ်။ ကားကိုထားခဲ့ပြီး တော့ ထွက်ပြေးရတယ်ပေါ့။ တကယ်တန်းပြောရမယ်ဆိုရင် ပရဟိတတွေက လွတ်လွတ်လပ်လပ် ကူညီခွင့်လည်း မရခဲ့ဘူး”ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
၎င်းက ဆက်၍ “ကျောင်းသားလေးတွေဆို အသက်မပြည့်တဲ့ ကလေးတွေလည်း ပါမယ်ဗျ။ သက်ကြီးရွယ်အိုတွေလည်း ပါတယ်ဗျ။ အကုန်လုံးဖမ်းဆီးပြီးတော့ ခေါ်ချသွားတယ်ပေါ့နော်။ ကျနော့်မျက်စိရှေ့မှာမြင်တာက အချုပ်ကားနဲ့ သုံးစီးကို အပြည့်ပဲ။ တင်သွားတယ်ဗျ။ ပျဉ်းမနား-ပေါင်းလောင်းလမ်းမှာပဲ”ဟု ပြောသည်။
မနေ့က ပျဉ်းမနားမြို့တွင် အဖမ်းခံရသူများထဲတွင် အရပ်ဝတ်ဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တဦးပင် ပါဝင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
“ဖမ်းချက်ကတော့ တော်တော်ဆိုးတာ။ ရဲမှန်းမသိ၊ ဘာမှန်းမသိ အကုန်ဖမ်းသွားတယ်ပေါ့။ ဖမ်းခံရတဲ့အထဲမှာ ရဲတောင် ပါတယ်။ ရဲက ကျနော်တို့လို အရပ်ဝတ် ဝတ်ထားတာ။ ဖမ်းတာက ရဲမှန်းမသိဘူး။ အကုန်လုံးကို ဖမ်းနေတော့ သူလည်း ပါသွားတာ”ဟု ရဲအဖမ်းရသည့် ဖြစ်စဉ်ကို သိရှိသူ ပျဉ်းမနားဒေသခံတဦးက ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် အဖမ်းခံရသူများကို နေပြည်တော်ရှိ ရဲတပ်ရင်း ၂၀ နှင့် ရဲတပ်ရင်း ၁၁ တို့တွင် ထိန်းသိမ်းထားကြောင်း သိရသော်လည်း အရည်အတွက် တိတိကျကျ မသိရကြောင်း၊ အဖမ်းခံရသူများကို ပြန်လွှတ်ပေးမည်ဟု သတင်းများ ထွက်ပေါ် နေသော်လည်း အတည်ပြုနေဆဲ ဖြစ်ကြောင်း ပျဉ်းမနားမြို့မှ အမည်မဖော်လိုသော ရှေ့နေတဦးက ပြောသည်။
နေပြည်တော် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ရဲမှူးကြီးတဦးကမူ ဖမ်းဆီးထားသူ ၁၈၀ ကျော်ကို ယခုနာရီပိုင်းအတွင်း ပြန်လွှတ်ပေးမည် ဖြစ် ကြောင်း၊ မိသားစုဝင်များနှင့် ချိတ်ဆက်မှုများ ပြုလုပ်ပေးထားပြီး ယင်းမိသားစုဝင်များမှာလည်း နေပြည်တော်ရှိ ရဲတပ် ရင်းတခု အနီးတွင် လာရောက်စောင့်ဆိုင်းနေပြီ ဖြစ်ကြောင်း ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
နေပြည်တော်တွင် စစ်တပ်က နိုင်ငံတော် အာဏာကို ရယူပြီးနောက် ဆန္ဒပြသူများကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီးအရေးယူလျက်ရှိ ပြီး အများစုမှာ ပြန်လည် လွတ်မြောက်လာသော်လည်း တချို့မှာ ယနေ့အချိန်အထိ ပြန်မလွတ်သေးဘဲ ပုဒ်မတချု့ိဖြင့် တရားရုံးများတွင် တရားစွဲတင်ခံရမည့် အခြေအနေများနှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။
အာဏာသိမ်း တပ်မတော် အစိုးရက ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ-၁၄၄ ကိုထုတ်ပြန်ထားသည့် နယ်မြေများအတွင်း၌ ဆန္ဒပြသူများအား ဖမ်းဆီးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ထားသည်။
]]> စွပ်စွဲခံရသည့် ပုဒ်မဖြင့် ချက်ချင်း အမိန့်ချပေးဖို့ ဦးဝင်းထိန် တောင်းဆိုခဲ့ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/20/238340.html Sat, 20 Feb 2021 03:31:15 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=238340
ဦးဝင်းထိန်ကို နိုင်ငံတော် အကြည်ညို ပျက်စေမှု ပုဒ်မ ၁၂၄ (က)ဖြင့် တရားလိုလုပ်၍ တရားစွဲသူမှာ နေပြည် တော် ဥတ္တရ သီရိခရိုင် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအေးလူ ဖြစ်ပြီး ဖေဖော်ဝါရီလ ၄ ရက်နေ့တွင် တရားရုံးသို့ ဦးတိုက် လျှောက်ထား ခဲ့ခြင်း ဖြစ်
The post စွပ်စွဲခံရသည့် ပုဒ်မဖြင့် ချက်ချင်း အမိန့်ချပေးဖို့ ဦးဝင်းထိန် တောင်းဆိုခဲ့ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> CDM လှုပ်ရှားသည့် အစိုးရဝန်ထမ်း ၈ ဦး အမိန့် ဖီဆန်မှုဖြင့် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံရ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/17/238229.html Wed, 17 Feb 2021 13:05:38 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=238229
တရားစွဲဆိုခံထားရသူများ အတပ်ခံထားရသည့် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈မှာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းက နည်းလမ်းတကျ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် အမိန့်ကို ဖီဆန်၍ ယခုလို ပုဒ်မ တပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း
The post CDM လှုပ်ရှားသည့် အစိုးရဝန်ထမ်း ၈ ဦး အမိန့် ဖီဆန်မှုဖြင့် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
ပြီးခဲ့သည့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က နေပြည်တော် မြို့မဈေး၌ Civil Disobedience Movement (CDM) လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင် ဆောင်ရွက်ခဲ့သည့် သမဝါယမ ဦးစီးဌာနမှ ဝန်ထမ်း ၈ ဦးကို အမိန့်အာဏာ ဖီဆန်မှု ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈ ဖြင့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံးတွင် ယနေ့ ဒုတိယအကြိမ် ရုံးထုတ်စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
တရားစွဲခံရသူများမှာ လယ်ဝေးမြို့နယ် သမဝါယမဦးစီးဌာနမှ ဦးစီးမှူး အမျိုးသမီး အပါအဝင် အကြီးတန်း စာရေးအမျိုးသမီး တဦး၊ အငယ်တန်း စာရေး အဆင့် အမျိုးသမီး ၃ ဦး စုစုပေါင်း ၅ ဦးနှင့် နေပြည်တော် ရုံးချုပ် သမဝါယမဦးစီးဌာနက အကြီး တန်းစာရေး အမျိုးသား တဦးနှင့် အငယ်တန်းစာရေး အမျိုးသမီး နှစ်ဦးတို့ ဖြစ်သည်။
တရားလိုမှာ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဇော်မင်းဆိုသူ ဖြစ်ပြီး ယမန်နေ့ ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၆ ရက်နေ့က ပုဒ်မ ၁၈၈ ဖြင့် တရားစွဲတင်လာရာ အာမခံပေး၍ ရသည့် ပုဒ်မ ဖြစ်သဖြင့် တွဲဖက်မြို့နယ် တရားသူကြီး ဦးပြည့်စုံကျော်က အာမခံ ပေးခဲ့ကြောင်း၊ ယနေ့တွင် ယင်းအမှုကို ဆက်လက် စစ်ဆေးခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ရှေ့နေများထံမှ သိရသည်။
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တွဲဖက် တရားသူကြီး ဒေါ်နန်းအေးမြသီရိက“ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းက ဥပဒေနဲ့အညီ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကို ဖီဆန်တယ်ဆိုပြီးတော့ စာရေးသားပြီး တရားရုံးကို ဦးတိုက် လျှောက်ထားတဲ့အမှု ဖြစ်ပါတယ်”ဟု သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
ယနေ့ အမှုကို စစ်ဆေးရာတွင် တရားလို ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးအောင်ဇော်မင်း၊ တရားလိုပြ သက်သေ ရဲမှူး ကြီး နေမျိုးထွဋ်အစား ရဲမှူး မျိုးညွှန့်၊ ရဲမှူးမြင့်နိုင်၊ ရဲမှူးသိန်းဌေးတို့ကို စစ်ဆေးခဲ့ကြောင်း၊ တရားခံဘက်မှ သမဝါယမ ဦး စီးမှူး အမျိုးသမီး ဖြစ်သူကို စစ်ဆေးခဲ့ရာ ရုံးချိန်ပြည့်သွားသဖြင့် မနက်ဖြန်တွင် ဆက်လက် စစ်ဆေးမည်ဟု သိရသည်။
“စာရွက်စာတမ်းတွေ အကုန် ကူးယူခွင့် မရသေးဘူး။ မြို့နယ် အထွေထွေ အုပ်ချုပ်ရေးမှူးကနေ ပုဒ်မ ၁၄၄ ထုတ်ထားတဲ့ အပေါ်မှာ သူတို့က ကျူးလွန်တယ်။ အဲဒါကြောင့် ပုဒ်မ ၁၈၈ ကို သုံးတာလို့ ပြောတယ်။ သူတို့ ထုတ်ပြန်ထားတဲ့အမိန့်ကို မလိုက်နာတဲ့အတွက် ဆွဲတာ”ဟု အစိုးရဝန်ထမ်းများဘက်မှ ရှေ့နေအဖြစ် လိုက်ပါဆောင်ရွက်နေသူတဦးက ပြောသည်။
ယနေ့ ရုံးချိန်းမှာ နံနက် ၁၁ နာရီမှ ညနေ ၄ နာရီခွဲအထိ ကြာမြင့်ခဲ့သည်။
တရားစွဲဆိုခံထားရသူများ မြို့နယ်တရားရုံးမှ ပြန်အထွက် အမှုကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ မေးမြန်းခွင့်ရရှိရန် ဧရာဝတီက ကြိုးစား ခဲ့သော်လည်း ၎င်းတို့က ဖြေကြားပေးရန် ငြင်းဆိုကြသည်။
တရားစွဲဆိုခံထားရသူများ အတပ်ခံထားရသည့် ရာဇသတ်ကြီး ဥပဒေ ပုဒ်မ ၁၈၈မှာ ပြည်သူ့ဝန်ထမ်းက နည်းလမ်းတကျ ထုတ်ပြန်ကြေညာသည့် အမိန့်ကို ဖီဆန်၍ ယခုလို ပုဒ်မ တပ်ရခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ယင်းသို့ ဖီဆန်ခြင်းသည် လူ့အသက်ကိုသော်လည်းကောင်း၊ ကျန်းမာရေးကိုသော်လည်းကောင်း၊ လုံခြုံရေးကို သော် လည်းကောင်း၊ ဘေးဖြစ်သော် သို့တည်းမဟုတ် ဘေးဖြစ်စေတတ်သော် သို့တည်းမဟုတ် ရုန်းရင်းဆန်ခတ်မှု ကိုသော် လည်းကောင်း၊ သတ်ပုတ်နှောက်ယှက်မှုကိုသော်လည်းကောင်း ဖြစ်စေသော် ထောင်ဒဏ်နှင့် ငွေဒဏ်များ ချမှတ်နိုင် သည်ဟု ရာဇတ်သတ်ကြီး ဥပဒေတွင် ဖော်ပြထားသည်။
နေပြည်တော်တွင် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့က မြို့မဈေးအနီး၌ အစိုးရ ဝန်ထမ်း ၈ ဦးကို ဖမ်းဆီးခဲ့သလို ဆန္ဒပြ ကျောင်း သား ၃၆ ဦး၊ ဥတ္တရသီရိမြို့နယ်၊ အမျိုးသားစီမံကိန်းနှင့်စီးပွားရေး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုဝန်ကြီးဌာနရုံးရှေ့တွင် ဆန္ဒပြသူ ၂၀ ဦး၊ ကျည်တောင်ကန်ရွာမှ ဒေသခံ ၂၀ ဦးတို့ကို ရဲတပ်ဖွဲ့က ဖမ်းဆီး ထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
၎င်းတို့ထဲမှ ဆန္ဒပြကျောင်းသား ၃၆ ဦးထဲမှ ၂၇ ဦးသည် ကျောင်းတက်နေဆဲ ကျောင်းသားများ ဖြစ်သဖြင့် ဖေဖော်ဝါရီလ ၁၅ ရက်နေ့ ညနေပိုင်းတွင် နေပြည်တော် အချုပ်ထောင်မှ ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သော်လည်း ကျန်ကျောင်းသား ၉ ဦးကို ပြန်လွှတ် ပေးခြင်း မရှိသေးပါ။
ထို့ပြင် ယခုလို CDM လှုပ်ရှားမှုတွင် ပါဝင်သူများကို ရုံးထုတ်စစ်ဆေးနေသည့် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံးသည် မနေ့က လည်း သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကိုလည်း ရုံးထုတ် စစ်ဆေးနေ သည့် ရုံးတခုဖြစ်ပြီး နေပြည်တော် ကောင်စီဝင်း အတွင်း၌ တည်ရှိသည်။
ယခုလို ရုံးချိန်းများကို လာရောက် သတင်းရယူသည့် သတင်းထောက်တချို့ကို နေပြည်တော် ကောင်စီအဝင်တွင် ရဲတပ်ဖွဲ့ က ပိတ်ဆို့ပြီး သတင်းရယူခွင့် မပြုကြောင်း၊ ကောင်စီဝင်းထဲသို့ အစိုးရ ဝန်ထမ်းကတ်ပြနိုင်သူသာလျှင် ဝင်ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း ပြောဆိုသဖြင့် ဝင်ခွင့်မရသည့် သတင်းထောက်များ ရှိခဲ့သည်။
အာဏာသိမ်း တပ်မတော် အစိုးရက ရာဇဝတ်ကျင့်ထုံး ဥပဒေပုဒ်မ – ၁၄၄ ကိုထုတ်ပြန်ထားသည့် နယ်မြေများအတွင်း၌ ဆန္ဒပြသူများအား ဖမ်းဆီးမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ထို့ပြင် လိုအပ်သလို ဆက်လက်ဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ထုတ်ပြန် ထားသည်။
]]> တရားစွဲခံရမှုအတွက် NLD ငှားရမ်းပေးသည့် ရှေ့နေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/16/238166.html Tue, 16 Feb 2021 12:27:44 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=238166
ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ၊ သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မတို့ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် (NLD)က ငှားရမ်းပေးသည့် ရှေ့နေကို လက်ခံမည်
The post တရားစွဲခံရမှုအတွက် NLD ငှားရမ်းပေးသည့် ရှေ့နေကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လက်ခံမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
ပို့ကုန်သွင်းကုန် ဥပဒေ ပုဒ်မ၊ သဘာဝဘေး စီမံခန့်ခွဲမှု ဥပဒေပုဒ်မတို့ဖြင့် တရားစွဲခံထားရသည့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံ ပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် (NLD)က ငှားရမ်းပေးသည့် ရှေ့နေကို လက်ခံမည်ဟု
ယနေ့ နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံးတွင် အထက်ပါအမှု ၂ ခုအတွက် Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ရုံးထုတ် တရား စွဲဆိုစဉ် တရားရုံး၏ မေးမြန်းမှုကို ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က အထက်ပါအတိုင်း ပြောဆိုခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရ သည်။
“ဒီနေ့က Video Conferencing စနစ်နဲ့ ရုံးတင်လာတယ်။ မြင်ရတယ်ပေါ့။ မြင်ရတာမှာ အန်တီ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်က သူကတော့ ရှေ့နေငှားရမ်း ထုချေမယ်လို့ ပြောတယ်။ ရှေ့နေကိုတော့ သူက အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ်က ငှားရမ်းပေး တဲ့ အတည်ပြုပေးတဲ့ ရှေ့နေကိုပဲ လက်ခံမယ်လို့ ပြောသွားတယ်”ဟု တွဲဖက်မြို့နယ် တရားသူကြီး ဒေါ်နန်းအေးမြသီရိက သတင်းထောက်များကို ပြောသည်။
ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံး၏ သတင်းပြန်ကြားရေး အရာရှိ ဖြစ်သူ ၎င်းက လာမည့် ရုံးချိန်းကို မတ်လ ၁ ရက်နေ့သို့ ချိန်းဆို လိုက်ကြောင်း၊ လက်ရှိ ကိုဗစ်ကပ်ရောဂါ အခြေအနေအရ ယခုအမှုကို Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ဆက်လက် စစ်ဆေးလိမ့်မည်ဟု ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ရှေ့နေအဖြစ် NLD ပါတီမှ တာဝန်ပေးထားသူ တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ယ နေ့ ရုံးချိန်းတွင် ၎င်းမှာ ရှေ့နေ ပါဝါ မရသေးသဖြင့် Video Conferencing လုပ်သည့် အခန်းထဲသို့ ဝင်ခွင့် မရခဲ့ကြောင်း၊ နောက်ရုံးချိန်းတွင် ရှေ့နေပါဝါ ရရှိရန် ရဲမှူးတဦးမှတဆင့် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်ထံသို့ ဆက်သွယ်ပြီး ကိုယ်စားလှယ် လွှဲ စာ ရရှိရန် ကြိုးစားမည်ဟု ပြောသည်။
“ဘယ်သူ့ကို တာဝန်ပေးမလဲဆိုတော့ အမျိုးသား ဒီမိုကရေစီ အဖွဲ့ ချုပ် (CEC) အဖွဲ့ကနေပြီးတော့ ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် အဖွဲ့ ကနေ တာဝန်ပေးတဲ့သူကိုပဲ ရှေ့နေကိုပဲ သူတာဝန်ယူပါမယ်လို့ ပြောပါတယ်တဲ့။ ၂ မှု စလုံး အတွက်ပေါ့နော်’’ဟု ဦး ခင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။
နောက်ပုဒ်မတခုမှာ နေအိမ်တွင် စကားပြောစက်များ တရားမဝင် တင်သွင်းထားသည်ဟု ဆိုကာ ပို့ကုန်သွင်းကုန် ပုဒ်မ ၈ ဖြင့် အမှုဖွင်၍ တရားရုံးသို့ တင်ထားခြင်း ဖြစ်ကြောင်း ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံးက အတည်ပြုသည်။
တပ်မတော်က အာဏာသိမ်းသည့် ၂၀၂၁ ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီ ၁ ရက်နေ့ နံနက်အစောပိုင်းတွင် သမ္မတဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်းခဲ့သည်။
သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့်နှင့် နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်၏ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်တို့ကို ဆက်လက် ဖမ်းဆီးထိန်းသိမ်း နိုင်ရန် မကျူးလွန်သည့် ပြစ်မှုများအတွက် ယခုလို ပုဒ်မများ တပ်၍ အရေးယူခြင်းသည် မတရား ဆောင်ရွက်ခြင်းဟု ပြောချင်ကြောင်း နေပြည်တော်ခရိုင် NLD ဥက္ကဌ ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
“အာဏာသိမ်းနိုင်ဖို့အတွက် သမ္မတကြီးကို ဖယ်ရှားဖို့အတွက် မမှန်တဲ့ မဟုတ်တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေနဲ့ အမှုဆင်လိုက်တာပဲ” ဟု ဦးမင်းသူက ပြောသည်။
နေပြည်တော် ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် တရားရုံးကမူ လက်ရှိ အချိန်အထိ တရားစီရင်ရေးကို ဥပဒေနှင့်ညီအောင် ဆောင်ရွက်လျက် ရှိကြောင်း၊ လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်ရေးဟု ဆိုသည့်အတိုင်း လွတ်လပ်စွာ တရားစီရင်လျက်ရှိကြောင်း တွဲဖက် မြို့နယ် တရားသူကြီး ဒေါ်နန်းအေးမြသီရိက ပြောသည်။
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ အမှုလိုက် ရှေ့နေအဖြစ် ကြိုးစားနေသည့် ဦးခင်မောင်ဇော်က ၎င်းတို့အနေဖြင့် သမ္မတ ဦးဝင်းမြင့် အတွက်လည်း ရှေ့နေပါဝါ ရရှိရန် ကြိုးစားမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယခု အမှုများအတွက် လက်ရှိ တရားရုံးများတွင် ကျင့်သုံးနေ သည့် Case Management Program (CMP) စနစ်အတိုင်း အချိန်ကာလ သတ်မှတ်ချက် ရရှိရန် နောက်ရုံးချိန်းများတွင် ကြိုးစားမည်ဟု ပြောသည်။
“သမ္မတကြီးကတော့ သူပြောတာက သူကတော့ ရှေ့နေပဲ။ သူကိုယ်တိုင်လည်း ဥပဒေသမားဆိုတော့ သူ့ဘာသာသူ ခုချေ လို့ ရတယ်ပေါ့လေ။ ဒါပေမယ့် ကျနော်တို့ကတော့ တင်လိုက်တဲ့အခါမှာ သူလက်မှတ်ထိုးလိုက်တယ်ဆိုရင်လည်း ကျနော် တို့က လိုက်ပါဆောင်ရွက်သွားမယ်”ဟု တရားလွှတ်တော် ရှေ့နေ ဦးခင်မောင်ဇော်က ပြောသည်။
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိခဲ့သည့် NLD ပါတီကို ပြည်ထောင်စု လွှတ်တော် ခေါ်ယူခွင့် တပ် မတော်က မပေးတော့ဘဲ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲမသမာမှုများ ရှိနိုင်သည်ဟုဆိုကာ လက်ရှိ အစိုးရထံမှ နိုင်ငံတော် အာဏာ ကို တပ်မတော်က ရယူထားသည်။
]]> ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး ဖြစ်လာ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/02/04/237628.html Thu, 04 Feb 2021 10:39:58 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=237628
လက်ရှိ ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ညှိနှိုင်း ကွပ်ကဲရေးမှူး ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မြထွန်းဦးသည် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင် လှိုင်၏ အာဏာ သိမ်း တပ်မတော် အစိုးရထံတွင် ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး တာဝန် ထမ်းဆောင်သွားပြီ ဖြစ်သဖြင့်
The post ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး ကြည်း၊ ရေ၊ လေ ညှိနှိုင်းကွပ်ကဲရေးမှူး ဖြစ်လာ appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်လက်နက်များ ရုရှားက မြန်မာကို ရောင်းချပေးမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/23/236945.html Sat, 23 Jan 2021 09:28:49 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236945
နေပြည်တော်သို့ ၂ ရက်ကြာ လာရောက်ခဲ့သည့် ရှရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army Gen eral Sergey K.SHOIGU ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချပေးမည်
The post လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်လက်နက်များ ရုရှားက မြန်မာကို ရောင်းချပေးမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
နေပြည်တော်သို့ ၂ ရက်ကြာ လာရောက်ခဲ့သည့် ရှရှားဖက်ဒရေးရှင်းနိုင်ငံ၊ ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Army General Sergey K.SHOIGU ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်လက်နက်ပစ္စည်းများ ရောင်းချပေးမည် ဟု သဘောတူညီချက် ရရှိခဲ့ကြောင်း သတင်း ရရှိသည်။
ရုရှားနိုင်ငံထုတ် Pantsir – S1 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး ဒုံးကျည်စနစ်များ၊ Orlan – 10E မောင်းသူမဲ့ လေယာဉ်များ၊ ရေဒါများအား မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောင်းချသွားမည်ဟု ရုရှားသတင်းဌာနများတွင် ဖော်ပြလျက်ရှိရာ ယင်းအချက်အလက်များ မှာ မှန်ကန်ကြောင်း တပ်မတော်က အတည်ပြုသည်။
တပ်မတော်၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက“စက်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်လို့ကတော့ အဲဒီဟာတွေ လည်း ရရှိမှာ မှန်ပါတယ်။ ပြောနိုင်တာကတော့ စက်လက်နက်ပစ္စည်းနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ရုရှားနဲ့ မြန်မာနဲ့က တပ်မတော် အဆင့်မြှင့်တင်ရေးအတွက် ဆောင်ရွက်နေတဲ့ လုပ်ငန်းတွေ ရှိပါတယ်”ဟု ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။
မြန်မာ့ တပ်မတော်တွင် လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးနှင့် ပတ်သက်ပြီး အဓိက စက်လက်နက် ပစ္စည်းများမှာ ရုရှား၏ နည်းပညာများ ဖြစ်ကြောင်း ၎င်းက ပြောသည်။
နိုင်ငံတကာ တပ်မတော်များတွင် သက်ဆိုင်ရာ နိုင်ငံအလိုက် အားသာချက်များရှိရာ အမေရိကန် ပြည်ထောင်စု၏ တပ်မ
တော်သည် ဘက်စုံသုံး တိုက်ခိုက်ရေးလေယာဉ် ထုတ်လုပ်မှုတွင် အကောင်းဆုံး အခြေအနေ၌ ရှိသကဲ့သို့ လေကြောင်း ရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်တွင် ရုရှားနိုင်ငံသည် အကောင်းဆုံး ဖြစ်သည်ဟု စစ်ရေးလေ့လာသူများ၏ ပြောဆိုချက်အရ သိရသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ အလုပ်သဘောရောက်ရှိလာသည့် ရုရှားကာကွယ်ရေးဝန်ကြီး Sergei Shoigu ၏ ခရီးစဉ်အတွင်း တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နှင့် တွေ့ ဆုံခဲ့ပြီးနောက် အထက်ပါ လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာ ပစ္စည်းများ ထောက်ပံ့ရန်အတွက် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲခြင်း ဖြစ်သည်။
ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးသည် ၎င်း၏ ၃ ကြိမ်မြောက် ခရီးစဉ်အတွင်း နေပြည်တော်ရှိ သူရဲကောင်း စစ်သည် ဗိမ္မာန်သို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီးနောက် ပန်းခွေချခြင်း အလေးပြုခြင်းများ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည်လည်း ရုရှားနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိစဉ်က ဒုတိယ ကမ္ဘာစစ် အထိမ်းအမှတ် ဆောက်လုပ်ခဲ့သည့် ဘုရားကျောင်းသို့ သွားရောက်လည်ပတ်ခြင်းမျိုး ရှိခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်သည် ရုရှားနိုင်ငံသို့ ၆ ကြိမ်တိုင်တိုင် သွားရောက်ခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်နှင့် ရုရှား ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးတို့သည် နှစ်နိုင်ငံတပ်မတော်နှစ်ရပ်အကြား စစ်ဘက် နည်းပညာပူး ပေါင်းဆောင်ရွက်မှုဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ လေ့ကျင့်ရေးဆိုင်ရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေး၊ တပ်မတော်(ကြည်း၊ ရေ၊ လေ)တပ်ဖွဲ့များနှင့် လက်ရုံးတပ်ဖွဲ့များ၏ စွမ်းရည်တိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ တပ်မတော်မှ သင်တန်းသား စေလွှတ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များ၊ အကြမ်းဖက်မှုတားဆီးကာကွယ်ရေးဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များကို အဓိက ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်ဟု သိရသည်။
မြန်မာ့တပ်မတော်မှ ဝယ်ယူမည့် ရုရှားနိုင်ငံထုတ် Pantsir – S1 လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေး စက်လက်နက် (ဓာတ်ပုံ – CC BY-SA 4.0)
ရုရှားနိုင်ငံက မြန်မာနိုင်ငံသို့ MiG -29 တိုက်လေယာဉ် အစီး ၃၀၊ Yak 130 တိုက်လေယာဉ် ၁၂ စီး၊ Mi – 24 / Mi – 35P ရဟတ်ယာဉ် ၁၀ စီး၊ Su-30 SME တိုက်လေယာဉ် ၆ စီး၊ Pechora – 2M လေကြောင်းရန် ကာကွယ်ရေးစနစ်များ၊ သံချပ် ကာ ယာဉ်များ ရောင်းချပေးခဲ့ပြီး ဖြစ်သည်။
ရုရှားနိုင်ငံထုတ် MiG – 29 လေယာဉ်များကို မြန်မာ့တပ်မတော်တွင် ၂၀၀၁ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အသုံးပြုလာနိုင်ခဲ့ပြီး ၂၀၁၂ ခု နှစ်တွင် MiG -29 လေယာဉ်များအား ထပ်မံအင်အားဖြည့်တင်းနိုင်ရန် အတွက် MiG-29 SE ၊ MiG-29 B နှင့် MiG-29 UB လေယာဉ်များအား ထပ်မံဝယ်ယူအသုံးပြုခဲ့သည်။ ထို့ပြင် အသုံးပြုနေသည့် MiG-29 လေယာဉ်များအား အဆင့်မြှင့်တင်ခဲ့ သည်။
“MiG – 29 က စဝယ်ကတည်းကဆိုရင် အစင်း ၃၀ လောက် ရှိတယ်။ အခု အသုံးပြုလို့ရတာက အစင်း ၂၀ လောက် ရှိ တယ်”ဟု စစ်ရေး လေ့လာနေသူတဦးက ပြောသည်။
MiG – 29 အပြင် ရုရှားနိုင်ငံမှ ဝယ်ယူထားသည် Yak – 130 ဘက်စုံသုံး တိုက်လေယာဉ်များသည်လည်း မဟာဗျူဟာ မြောက် စွမ်းဆောင်ရည်ရှိကြောင်း သိရသည်။
“အဲလို လေယာဉ်တွေက ဒီပြင့်နိုင်ငံကိုလည်း သွားတိုက်လို့ ရတယ်။ ဆိုလိုတာက မြန်မာနိုင်ငံ အလယ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ မိတ္ထီ လာလောက်ကနေ ဒီပြင့်နိုင်ငံကို သွားတိုက်လို့ရတယ်။ ပြန်လာလို့ ရတယ်”ဟု စစ်ရေး လေ့လာသူတဦးက ပြောသည်။
၂၀၁၇ ခုနှစ်မှ စတင်၍ အသုံးပြုခဲ့သည့် ရုရှားနိုင်ငံထုတ် Yak – 130 အပေါ့စား ဂျက်တိုက်လေယာဉ်များသည် မြန်မာ့ရေ၊ မြေ၊ ဝေဟင်နှင့် ကိုက်ညီသည့် အပေါ့စားတိုက် လေယာဉ်များ ဖြစ်ခဲ့သည်ဟု သိရသည်။
ရုရှားနိုင်ငံထုတ် Su – 30 ၆ စင်းသည်လည်း ယခုနှစ်ထဲတွင် မြန်မာနိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိလာတော့မည် ဖြစ်ရာ ရုရှားနိုင်ငံ၏ Sukhoi Aviation Corporation မှ ထုတ်လုပ်ပြီး ၁၉၉၆ မှ စတင်၍ ရုရှား လေတပ်တွင် အသုံးပြုခဲ့သည့် Su – 30 သည် ဘက်စုံသုံး တိုက်လေယာဉ်ဖြစ်ပြီး လေကြောင်း အရေးသာမှုနှင့် မြေပြင်တိုက်ခိုက်ရေး တာဝန်များ ထမ်းဆောင်နိုင်သဖြင့် ကျော်ကြားသည်။
မျိုးကွဲပေါင်းများစွာ ထုတ်လုပ်ထားသော်လည်း Su -30K နှင့် Su – 30 MK တို့မှာ နာမည်ကြီးသည်။ ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ဆီးရီးယား စစ်ပြေပြင်တွင် ရုရှား၏ Su – 30 အမျိုးအစား တိုက်လေယာဉ်များက အစွမ်းပြနိုင်ခဲ့သည်။
“Su – 30 က MiG – 29 ထက် ပိုမြင့်တယ်။ လက်နက်အင်အား တပ်ဆင်မှုရော ပိုမြင့်တယ်။ လေပေါ်မှာက ကြိုတင် မြင် နိုင်စွမ်းက အရေးပါတာ”ဟု စစ်ရေးလေ့လာသူတဦးက ပြောသည်။
]]> သမ္မတနဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ နေပြည်တော်တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အထိုးခံမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/22/236888.html Fri, 22 Jan 2021 06:24:00 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236888
ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးများကို နေပြည်တော်ရှိ ကျန်းမာရေး ဝန်ထမ်း ၃ ထောင်ခန့်ကို အရင်ဆုံး ထိုးနှံပေးမည် ဖြစ်ပြီး ယင်း နောက်တွင် အရေးကြီးသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များ၊ အစိုးရ ယန္တရား လည်ပတ်ရန် အရေးကြီးသည့် ဌာနဆိုင်ရာ ဝန် ထမ်းများကို ထိုးနှံပေးမည် ဖြစ်သည်
The post သမ္မတနဲ့ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်တို့ နေပြည်တော်တွင် ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး အထိုးခံမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နေပြည်တော် စစ်တိုင်းမှူး အပြောင်းအလဲ ဖြစ် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/17/236590.html Sun, 17 Jan 2021 09:53:19 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236590
နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သောင်းထိုက်ရွှေအား တပ်မတော် အရန်အင်အားသို့ ပို့ ဆောင်လိုက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး၊ စခန်းမှူးရုံး စခန်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မျိုးတင်ကို နေပြည်တော် တိုင်း မှူးအဖြစ်
The post နေပြည်တော် စစ်တိုင်းမှူး အပြောင်းအလဲ ဖြစ် appeared first on ဧရာဝတီ.
နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သောင်းထိုက်ရွှေအား တပ်မတော် အရန်အင်အားသို့ ပို့ဆောင်လိုက်ပြီး တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံး၊ စခန်းမှူးရုံး စခန်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မျိုးတင်ကို နေပြည်တော် တိုင်းမှူးအဖြစ် ခန့်အပ် တာဝန်ပေးလိုက်ကြောင်း သိရသည်။
နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဖြစ်လာသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မျိုးတင်သည် စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၃၂ မှ ဖြစ်ပြီး ၂၀၁၆ ခုနှစ်က ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်မျိုးတင်အဖြစ် ကယားပြည်နယ် လွှတ်တော်၏ တပ်မတော်သား လွှတ်တော် ကိုယ်စား လှယ်နှင့် ကယားပြည်နယ် လုံခြုံရေးနှင့် နယ်စပ်ရေးရာဝန်ကြီးအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့သူတဦး ဖြစ်သည်။
အသက် ၅၂ နှစ်ခန့် ရှိပြီ ဖြစ်သည့် ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မျိုးတင်သည် လုံ/နယ် ဝန်ကြီး ဖြစ်ပြီးနောက် ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ် (လွိုင်ကော်)တွင် ဒကစမှူး ဗိုလ်မှူးချုပ် ဖြစ်လာခဲ့သည်။ ထို့နောက် နေပြည်တော်ရှိ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးသို့ ဗိုလ်ချုပ် ရာထူးဖြင့် စခန်းမှူး ရာထူးဖြင့် ရောက်ရှိလာသူ ဖြစ်သည်။
တပ်မတော် အရန်အင်အားသို့ ရောက်ရှိသွားသူ လက်ရှိ နေပြည်တော်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် သောင်းထိုက် ရွှေသည် စစ်တက္ကသိုလ် အပတ်စဉ် ၃၃ မှ ဖြစ်ပြီး ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတိုင်း တိုင်းမှူးမှ နေပြည်တော် တိုင်းမှူး ဖြစ်လာသူ တဦး ဖြစ်သည်။
ဗိုလ်ချုပ် သောင်းထိုက်ရွှေသည် ၂၀၁၆ ခုနှစ် NLD အစိုးရ တက်ခါစတွင် စစ်ဦးစီး ဗိုလ်မှူးချုပ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး နောက်ပိုင်းတွင် စစ်တက္ကသိုလ် ကျောင်းအုပ်ကြီး ဖြစ်လာသူတဦး ဖြစ်သည်။
၎င်းနေပြည်တော်သို့ တိုင်းမှူးအဖြစ် ရောက်ရှိလာသည့်အခါ ထိုစဉ်က နေပြည်တော်တိုင်းမှူးမှာ ဗိုလ်ချုပ် မြင့်မော်ဖြစ်ပြီး ဗိုလ်ချုပ် မြင့်မော်သည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလက ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ရာထူးဖြင့် အငြိမ်းစား ယူသွားခဲ့သည်။
တပ်မတော် အရာရှိ ဟောင်းတဦးက“နေပြည်တော် တိုင်းမှူးက အရေးကြီးတော့ တပ်ချုပ်က သူယုံကြည်ရတဲ့သူမျိုးကိုပဲ ထားတာ။ စစ်ရုံးကလည်း နေပြည်တော်မှာပဲ ရှိတာကိုး။ အရင် စစ်ရုံးက ရန်ကုန်မှာ ရှိတုန်းကဆိုရင် ရန်ကုန်တိုင်းမှူးက အရေးကြီးတယ်။ အခု တိုင်းမှူး အပြောင်းအလဲမှာ ထူးခြားတာက စခန်းမှူးကို တိုင်းမှူးပေးတာပဲ။ အရင် ဒီလိုမျိုး သိပ် မရှိခဲ့ဘူး”ဟု ပြောသည်။
တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် လက်ထက်တွင် စစ်တိုင်းမှူးများကို မကြာခဏ ပြောင်း လဲ တာဝန်ပေးမှုများရှိပြီး တချို့ သော တိုင်းမှူးများမှာလည်း စစ်ရေး လိုအပ်ချက်နှင့် အညီ ပြောင်းလဲ တာဝန်ပေးခြင်း၊ တ ချို့မှာ အဂတိ လိုက်စားမှုများ၏ကြောင့် အရေးယူခံရသည့် ဖြစ်စဉ်များလည်း ရှိခဲ့ဖူးသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လကလည်း ရခိုင်ပြည်နယ်ကို အဓိက တာဝန်ယူရသည့် အနောက်တောင်တိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ဖုန်းမြတ်ကို နယ်စပ်ရေးရာ ဒုတိယ ဝန်ကြီးအဖြစ်သို့ ပြောင်းလဲတာဝန်ပေးအပ်ခဲ့သေးသည်။
လက်ရှိ တိုင်းမှူးများမှာ တောင်းပိုင်းတိုင်း စစ်ဌာနချုပ် တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မျိုးဝင်း၊ အလယ်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ကိုကိုဦး၊ အနောက်မြောက်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် မိုးမျိုးအောင်၊ အနောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ထင်လတ်ဦး၊ အနောက်တောင်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် အောင်အောင်၊ ရန်ကုန်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ညွှန့်ဝင်းဆွေ၊ ကမ်းရိုးတန်း ဒေသတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် စောသန်းလှိုင်၊ အရှေ့တောင်တိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ကိုကိုမောင်၊ တြိဂံဒေသတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ် ခင်လှိုင်၊ မြောက်ပိုင်းတိုင်း တိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်တေဇကျော်တို့ ဖြစ်ကြသည်။
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလကလည်း ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးများ ဖြစ်သည့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး ထွန်းထွန်းနောင်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မင်းနောင်၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး တင်မောင်ဝင်း၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး မောင်မောင်အေး၊ ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး သန်းထွန်းဦးနှင့် ဒုတိယ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး လူအေးတို့ကို တပ်မတော် အရန်အင်အားသို့ ပြောင်းရွှေ့ တာဝန် ထမ်းဆောင်ခွင့် ပြုခဲ့သေးသည်။
]]> ကြံ့ခိုင်ရေး၏ လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူရေး ကြိုးပမ်းမှု တပ်မတော် ပူးပေါင်းမည် https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/11/236273.html Mon, 11 Jan 2021 10:48:00 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236273
၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် မဲအပြတ်အသတ် ရှုံးနိမ့်ခဲ့မှုကို မကျေနပ်သဖြင့် အတိုက်အခံ ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီက ဒုတိယအကြိမ် ပြည်ထောင်စုလွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူနိုင်ရေး ကြိုးပမ်းမှုတွင် တပ်မတော်က ပူးပေါင်း ပါ ဝင်မည်
The post ကြံ့ခိုင်ရေး၏ လွှတ်တော် အထူးအစည်းအဝေး ခေါ်ယူရေး ကြိုးပမ်းမှု တပ်မတော် ပူးပေါင်းမည် appeared first on ဧရာဝတီ.
]]> နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ တရုတ်ခြံစည်းရိုးများ ပြန်ဖျက်ပေးရမည်ဟု သမ္မတရုံး ပြော https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/09/236194.html Sat, 09 Jan 2021 09:39:03 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=236194
အပြည့်အဝ အကြောင်းကြားမှု မရှိဘဲ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်း ဝင်ရောက် ကာရံထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခြံစည်းရိုးများ သည် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကြား နယ်နမိတ်စာချုပ်အရ ကာရံခွင့် မရှိသဖြင့် ပြန်လည် ဖျက်သိမ်းပေးရမည်
The post နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ တရုတ်ခြံစည်းရိုးများ ပြန်ဖျက်ပေးရမည်ဟု သမ္မတရုံး ပြော appeared first on ဧရာဝတီ.
အပြည့်အဝ အကြောင်းကြားမှု မရှိဘဲ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်း ဝင်ရောက် ကာရံထားသည့် တရုတ်နိုင်ငံ၏ ခြံစည်းရိုးများ သည် တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံကြား နယ်နမိတ်စာချုပ်အရ ကာရံခွင့် မရှိသဖြင့် ပြန်လည် ဖျက်သိမ်းပေးရမည် ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာအစိုးရ၊ နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
မနေ့က နေပြည်တော်တွင် ပြုလုပ်သည့် နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ဧရာဝတီသတင်းဌာနက တ ရုတ်ဘက်မှ ကာရံမှုများ ပြုလုပ်လာသည့် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးများအကြောင်း မေးမြန်းစဉ် ဦးဇော်ဌေးက အထက်ပါ အတိုင်း ပြန်လည် ဖြေကြားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
“နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ် စာချုပ် ရှိတယ်။ ဒီနယ်နမိတ်မျဉ်းရဲ့ ဟိုဘက် ၁၀ မီတာ၊ ဒီဘက် ၁၀ မီတာ အဲဒီနယ်နမိတ်အတွင်းမှာ ဘယ်သူမှ အခိုင်အမာ အဆောက်အဦ ဆောက်လို့ မရဘူး။ ဆောက်ရင် ဖျက်ပေးရမယ်”ဟု ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
ကိုဗစ်ကာလတွင် လူများ ကူးလူးဆက်ဆံမှု မရှိစေရန် ယာယီ ခြုံစည်းရိုးများ ကာရံနေသည် ဆိုသော တရုတ်ဘက်က အကြောင်းပြချက် ပေးထားသည့် သံဆူးလိပ် ခြံစည်းရိုးများသည် နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်းရှိ မိုင်တိုင်များကြားသို့ ရောက်ရှိနေကြောင်း သမ္မတရုံးက ပြောသည်။
ဦးဇော်ဌေးက “မေးခွန်းက ဘာလဲဆိုတော့ ဒီနယ်နမိတ်မျဉ်းရဲ့ အတွင်းမှာ ကာတဲ့ ခြံစည်းရိုးသည် အခိုင်အမာ ဟုတ်ခြင်း၊ မဟုတ်ခြင်းပေါ့နော်။ နောက်တခုက သူတို့က ဒီမိုင်တိုင်နဲ့ ဒီမိုင်တိုင်ကြားမှာရှိတဲ့ လိုင်းကို သူ(တရုတ်)က ခြံစည်းရိုးကို ကာတာ ဖြစ်တယ်”ဟု သတင်းစာ ရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
ထို့ကြောင့် နှစ်နိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာနမှ ဒုတိယ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် အဆင့်ရှိ တာဝန်ရှိသူများကြား တွေ့ ဆုံ ဆွေး နွေးမှုကို ယခုလထဲတွင် ပြုလုပ်မည် ဖြစ်ပြီး ခြံစည်းရိုး ကာရံမှုကိုလည်း ယာယီသာ ခွင့်ပြုမည် ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
ရှမ်းပြည်နယ် လောက်ကိုင်ခရိုင်၊ မူဆယ်ခရိုင်၊ ဟိုပန်ခရိုင်၊ ဝ ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရတိုင်းတို့တွင် တရုတ်နိုင်ငံဘက်က ခြံ စည်းရိုးများ ကာရံလာသဖြင့် ပြည်နယ် အစိုးရထံ သမ္မတရုံးက အချက်အလက်များ တောင်းကြည့်ရာ ကွန်ကရစ်နှင့် အ ခိုင်အမာ ကာရံခြင်းမျိုး မတွေ့ ရဘဲ သံဆူးကြိုးလိပ်များကို တိုင်ထောင်ပြီး ကာရံနေခြင်းသာ ဖြစ်ကြောင်း တွေ့ ရှိရသည်ဟု ဆိုသည်။
သမ္မတရုံး ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဦးဇော်ဌေးက ရှမ်းပြည်နယ်နှင့် တရုတ်နယ်စပ်ရှိ ခြံစည်းရိုးများကိုသာ အဓိက ရည်ညွှန်း ပြောဆိုခဲ့ပြီး ကချင်ပြည်နယ်ရှိ နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးများအကြောင်း ပါဝင်ခဲ့ခြင်း မရှိပါ။
ကချင်ပြည်နယ်အတွင်းရှိ အစိုးရအာဏာ မသက်ရောက်သည့် ကချင်လွတ်လပ်ရေး တပ်မတော် (KIA) ထိန်းချုပ်သည့် တရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်ရှိ လိုင်ဇာမြို့နှင့် ပါဂျောင်ဒေသ၏ တဖက်တွင်လည်း တရုတ်ဘက်မှ ခြံစည်းရိုးလာရောက် ကာရံမှုများ ရှိနေသည်။
ဦးဇော်ဌေးက“နယ်နမိတ်မျဉ်းကို ပြန်ဖော်မယ်။ နံပါတ်တစ်။ နှစ်ပါတ်နှစ်က ဒီနယ်နမိတ်မျဉ်းကို မကျော်ရအောင် ခြံစည်းရိုး ကို စနစ်တကျ ကာရံရမယ်။ ယာယီပေါ့နော်။ နံပါတ်သုံးက အဲဒီ ခြံစည်းရိုးကာချင်တာကို ဘယ်သူက ကာချင်တာလဲ။ မြန် မာက ကာချင်တာလား။ တရုတ်က ကာချင်တာလား။ ကာချင်တဲ့လူက အဲဒီ ကုန်ကျစရိတ်ကို ပေး။ အဲလိုမျိုး ကျနေ်ာတို့ ညှိမယ်”ဟု ပြောသည်။
တရုတ်-မြန်မာ နယ်နမိတ်တွင် နယ်စပ်ခြံစည်းရိုး ပြဿနာနှင့် ပတ်သက်၍ နယ်နမိတ်အတွင်း ၁၀ မီတာအတွင်း အခိုင် အမာ အဆောက်အဦ မဆောက်ရဆိုသည့် ရပ်တည်ချက်အတိုင်း တပ်မတော်က ရပ်တည်မည် ဖြစ်ကြောင်း၊ ယင်းနယ်စပ် များတွင် တည်ရှိသည့် ဒေသကွပ်ကဲမှု စစ်ဌာနချုပ်များက နယ်စပ်မျဉ်းကို စောင့်ကြည့်လျက် ရှိကြောင်း တပ်မတော်မှ ပြော ရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
“နယ်ဘက် အဖွဲ့ အစည်းတွေနဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်။ နယ်မြေဒေသမှာ ရှိနေတဲ့ လုံခြုံရေးအဖွ့ဲတွေက သတင်းရရှိ တာနဲ့ သွားရောက်စစ်ဆေးတဲ့အခါ နယ်ခြားကော်မတီတွေမှာ တပ်က ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်နေတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်း ထွန်းက ပြောသည်။
တရုတ်-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ် သဘောတူစာချုပ်ကို ၁၉၆၀ ခုနှစ် အောက်တိုဘာ ၁ ရက်တွင် မြန်မာ ဝန်ကြီးချုပ် ဦးနုနှင့် တရုတ် ဝန်ကြီးချုပ် ချူအင်လိုင်းတို့ကြား သဘောတူညီ ချုပ်ဆိုခဲ့ပြီး ၁၉၆၁ ခုနှစ်တွင် နယ်နိမိတ် မှတ်တိုင်များကို စိုက်ထူခဲ့သည်။
မြန်မာ-တရုတ် နှစ်နိုင်ငံနယ်နိမိတ်‌ကျောက်တိုင်(BP-125)အနီး နှစ်ဖက်ညှိနှိုင်းတိုင်းတာနေစဉ် (ဓာတ်ပုံ-ဦးငွေဒိုး)
နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ်ပါ အချက်များအရ တရုတ်နှင့် မြန်မာနိုင်ငံကြား နှစ်နိုင်ငံ ထိစပ်နေသည့် နယ်နိမိတ် ၁၃၄၈ မိုင် ရှိပြီး နှစ်နိုင်ငံနယ်စပ်မျဉ်း၏ ၁၀ မီတာအကွာတွင် မည်သည့် အခိုင်အမာ အဆောက်အအုံမှ မဆောက်ရန် နှစ်ဖက် သ ဘောတူညီခဲ့ကြသည်။
ယခုအခါ ယင်းသဘောတူညီမှုကို တရုတ်ဘက်က စတင်ချိုးဖောက်ခြင်း ဖြစ်ပြီး နှစ်နိုင်ငံ နယ်နမိတ်အတွင်း ခြံစည်းရိုးများ စိုက်ထူလာခြင်း ဖြစ်သည်။
ထို့ပြင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်ဝါရီလကလည်း ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကိုးကန့် ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ချင်းရွှေဟော်မြို့ရှိ တ ရုတ်-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် လွှင့်ထူထားသော မြန်မာ အလံတိုင်ကို တရုတ်နယ်ခြားစောင့်တပ်က လက်နက် အပြည့်အစုံ ဖြင့် လာရောက်၍ ဖြုတ်ချခဲ့မှုကြောင့် ၂ နိုင်ငံ ဆက်ဆက်ရေးကို ထိခိုက်စေခဲ့သည်။
ယင်းပြဿနာအပြီးတွင် ယင်းဒေသ၌ နယ်နိမိတ် ပြန်လည် သတ်မှတ်ရန် လိုအပ်နေပြီ ဖြစ်ကြောင်း မြန်မာ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီးဌာန တာဝန်ရှိသူတဦးက ဧရာဝတီသို့ ပြောဆိုခဲ့သည်။
၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလက ကိုးကန့်ကိုယ်ပိုင် အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေသ ချင်းရွှေဟော်မြို့ အမှတ်(၂) ရပ်ကွက် နယ်နိမိတ် ကျောက်တိုင် အမှတ် BP- 144/3 နှင့် BP-144/4 ကြား ခန့်မှန်း မြေပုံညွန်း (MF-824965) ရှိ နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ်မျဉ်းမှ (၄.၇) မီတာခန့်အကွာ တွင် စိုက်ထူထားသော မြန်မာနိုင်ငံ အလံတိုင်နေရာသို့ တရုတ် နယ်ခြားစောင့်တပ်မှ ဝင်ရောက်ဖျက်ဆီးခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။
မြန်မာ့နိုင်ငံရေး လေ့လာသူ ဦးသန်းစိုးနိုင်က“တရုတ်ပြည်က နိုင်ငံကြီး သဘောသဘာဝအရ နေရာတကာမှာ ပါတယ်။ ကျန်တဲ့ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံတွေကို အထင်သေးတယ်။ ဒီခြံစည်းရိုး ကာတာကတော့ တရုတ်ရဲ့ နိုင်ငံတော်အဆင့် မူဝါဒ တွေတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့ လုံခြုံရေးအတွက် လုပ်တာပေါ့”ဟု ပြောသည်။
မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ တရုတ်နိုင်ငံအနေဖြင့် နှစ်နိုင်ငံ သဘောတူစာချုပ်များကို လေးစားရမည် ဖြစ်သလို မြန်မာဘက်ကလည်း တွေ့ ဆုံညှိနှိုင်းမှုများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာလူထု၏ အကျိုးစီးပွားကို ထိခိုက်လာပါက ကန့်ကွက်ပြောဆိုမှုများ အပါအဝင် လုပ်သင့်လုပ်ထိုက်သည့် တုံ့ပြန်မှုများများ ပြုလုပ်ရမည် ဖြစ်သလို ငြိမ်ခံနေ၍ မဖြစ်ကြောင်း ဦးသန်းစိုးနိုင်က ပြောသည်။
ယခု ဇန်နဝါရီလလယ်ပိုင်းတွင် တရုတ်နိုင်ငံ၏ နိုင်ငံခြားရေး ဝန်ကြီး မစ္စတာ ဝမ်ယိလည်း မြန်မာနိုင်ငံသို့ ချစ်ကြည်ရေး လာရောက်မည် ဖြစ်ရာ ၎င်း၏ ခရီးစဉ်တွင် ယခုလို နယ်စပ်ခြံစည်းရိုးများကိစ္စအပေါ် မြန်မာခေါင်းဆောင်များဘက်မှ ပြောဆို ဆွေးနွေးလိမ့်မည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။
ယခုလို နှစ်နိုင်ငံ နယ်နိမိတ် အငြင်းပွားမှုများ ဖြစ်ပေါ်ပါက ဖြေရှင်းနိုင်ရေးအတွက် မြန်မာ-တရုတ် နယ်စပ်ဒေသများ စီမံခန့် ခွဲရေးနှင့် ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးဆိုင်ရာ သဘောတူ စာချုပ်ကို ၁၉၉၇ ခုနှစ်တွင် လက်မှတ် ရေးထိုးထားခဲ့ကြောင်း သိရ သည်။
ယင်းသဘောတူစာချုပ်ပါ အခြေအနေများ အပါအဝင် လက်ရှိ မြန်မာ- တရုတ် နယ်စပ် အငြင်းပွားမှုများ ဖြေရှင်းနိုင်ရေး အတွက် ဆောင်ရွက်မည့် ကိစ္စများကို တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ဆက်လက် ဆွေးနွေးနေသလို နယ်စပ် အငြင်းပွားမှုများ ထပ်မံ မဖြစ် ပေါ်လာရေးအတွက် ပူးတွဲ ရည်မှန်းချက်တခုကို ဖော်ဆောင်ရန်လည်း မြန်မာအစိုးရက ကြိုးပမ်းလျက်ရှိသည်။
]]> ရခိုင်စစ်မျက်နှာတွင် အသေခံတိုက်ခဲ့သည့် ရဲဘော်သက်ရှည် “သူရဘွဲ့” ချီးမြှင့်ခံရ https://burma.irrawaddy.com/news/2021/01/05/235953.html Tue, 05 Jan 2021 10:21:33 +0000 https://burma.irrawaddy.com/?p=235953
ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်ရှိ စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲတခုတွင် လက်ပစ်ဗုံးစနစ်တံဖြုတ်၍ ဘန်ကာအတွင်းသို့ အသေခံ ဝင်ရောက်သွားသူ ရဲဘော်သက်ရှည်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတက “သူရဘွဲ့” ချီးမြှင့်လိုက်ကြောင်း
The post ရခိုင်စစ်မျက်နှာတွင် အသေခံတိုက်ခဲ့သည့် ရဲဘော်သက်ရှည် “သူရဘွဲ့” ချီးမြှင့်ခံရ appeared first on ဧရာဝတီ.
ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလက တိုက်ပွဲများ ပြင်းထန်ခဲ့သည့် ရခိုင်ပြည်နယ်၊ မင်းပြားမြို့နယ်ရှိ စခန်းသိမ်း တိုက်ပွဲတခုတွင် လက်ပစ်ဗုံးစနစ်တံဖြုတ်၍ ဘန်ကာအတွင်းသို့ အသေခံ ဝင်ရောက်သွားသူ ရဲဘော်သက်ရှည်ကို နိုင်ငံတော် သမ္မတက “သူ ရဘွဲ့” ချီးမြှင့်လိုက်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
တိုက်ပွဲတွင် ကျဆုံးချိန်၌ အမှတ် ၂၀၇ ခြေမြန် တပ်ရင်းမှ တပ်သား သက်ရှည်ကို တပ်မတော်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်သတ္တိ “သူရ ဘွဲ့”ချီးမြှင့်အပ်နှင်းကြောင်း ယမန်နေ့က နိုင်ငံတော် သမ္မတရုံး၏ ကြေညာချက်တွင် ဒုတိယ တပ်ကြပ်ဟု ဖော်ပြခဲ့သဖြင့် သေဆုံးပြီးချိန်တွင် ရာထူးတဆင့်တိုး ခံစားခဲ့ရသည်။
ဧရာဝတီတိုင်း၊ မော်လမြိုင်ကျွန်းမြို့နယ်၊ ရွာသစ်ကျေးရွာဇာတိ ဖြစ်သူ အသက် ၂၄ နှစ်အရွယ် ဒုတပ်ကြပ်သက်ရှည်တွင် ဇနီးနှင့် သားတဦး ကျန်ရှိခဲ့သည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ မေလ ၇ ရက်နေ့က မင်းပြားမြို့နယ် ရာမောင်တံတားအနီးရှိ တောင်ကုန်းကြီး ၃ ခု၊ ကာကင်းကုန်း တခုတို့ကို တပ်မတော်က ဝင်ရောက် သိမ်းပိုက်စဉ် ရဲဘော်သက်ရှည် ပါဝင်သည့် တပ်စု(၁) ​ချေမှုန်းရေးအဖွဲ့ သည် ရက္ခိုင့်စစ်တပ် (AA) တပ်စွဲထားသည့် ကာကင်းကုန်းပေါ်ရှိ သစ်လုံးဘန်ကာ ၄ လုံးကို ဝင်ရောက် သိမ်းပိုက်ရန် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။
“AA ဘက်မှ တရုတ်စက်လတ်တွေ၊ လက်ပစ်ဗုံးတွေနဲ့ အပြင်းအထန် ခုခံနေတော့ ရှေ့ မတက်နိုင်ဘဲ ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာ ရဲဘော်သက်ရှည်က သူ့မှာပါတဲ့ လက်ပစ်ဗုံးကို စနက်တံဖြုတ်ပြီး အသက်အသေခံ ဘန်ကာထဲကို ဝင်သွားတာ။ အဲဒီမှာ တဖက်က လူတွေလည်း ကျသွားကြတယ်”ဟု တပ်မတော်မှ ပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူ ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
သီဟသူရဘွဲ့ ရ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အေးမင်းအောင် (ဓာတ်ပုံ – ဧရာဝတီ)
တပ်သားသက်ရှည်၏ လုပ်ရပ်ကြောင့် တဖက်မှ အံ့သြနေသည့် အချိန်တွင် ကျန်သည့် အဖွဲ့များကပါ ဝိုင်းဝန်း ပစ်ခတ်သည့် အခါ ယင်းဘန်ကာထဲမှ အာပီဂျီ ၁ လက်၊ အမ်-၂၂ တလက်နှင့် အလောင်းတချို့ ရလိုက်ကြောင်း၊ ယင်းဘန်ကာ ကျသွား သဖြင့် AA ဘက်က ဆက်မတိုက်နိုင်သည့်အခါ ကာကင်းကုန်းကို တပ်မတော်က သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ကြောင်း သိရသည်။
စစ်သားကောင်း ပီသစွာ အသက်စွန့်၍ ဘန်ကာအတွင်းရှိ ရန်သူအား လက်ပစ်ဗုံး ပစ်သွင်း တိုက်ခိုက်ခဲ့မှုကြောင့် အဆိုပါ ကာကင်းကုန်းရှိ ဘန်ကာအား သိမ်းပိုက်နိုင်ခြင်းသည် ပင်မကုန်းဖြစ်သည့် ပွိုင့် ၁၁၄ တောင်ကုန်းအား သိမ်းပိုက်ရန် အထောက်အပံ့ ဖြစ်ခဲ့၍ ရဲဘော်သက်ရှည်သည် “သူရဘွဲ့” ရသင့်ကြောင်း တပ်မမှူးက ထောက်ခံ တင်ပြခဲ့သည်။
ယင်းနေရာသည် ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ ၂၀ ရက်နေ့က ကိုဗစ်တို့ဖတ် နမူနာများ တင်ဆောက်လာသည့် WHO ကား တိုက် ခိုက်ခံရသည့် ရာမောင်တံတား ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ တောင်ကုန်းများတွင် ဖြစ်ပြီး စစ်ဆင်ရေးဗျူဟာအရ အရေးကြီးသော နေရာ များ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ထို့ကြောင့် ကျဆုံးသွားသည့် စစ်သည်မိသားစုဝင်များကို တပ်မတော်က ၎င်းတို့အတွက် နေထိုင်စရာအိမ်၊ အငြိမ်းစား လစာ၊ သက်စွန့်ဆုကြေးတို့အပြင် ကျန်ရှိသူ မိသားစုအတွက် အလုပ်အကိုင်များပါ ရှာပေးမည်ဟု ဆိုသည်။
ရဲဘော်သက်ရှည်သည် ယခု ၂၀၂၁ ခုနှစ်အတွက် သူရဘွဲ့ကို ရရှိခြင်း ဖြစ်ပြီး လာမည့်နှစ်တွင် အခမ်းအနားနှင့် နိုင်ငံတော် သမ္မတကိုယ်တိုင် ကျန်ရစ်သူ မိသားစုကို ဆုချီးမြှင့်မည် ဖြစ်သည်။
“ဘွဲ့တွေအားလုံးကို ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ရုံးကနေ ထောက်ခံပြီး တင်ပြရတာပေါ့။ အောင်ဆန်းသူရိယ၊ သီဟသူရ၊ သူရ တို့ ဆိုတဲ့ ဘွဲ့တွေက နိုင်ငံတော် သမ္မတ၊ အစိုးရ အဖွဲ့ရုံးက ရွေးရတာပေါ့။ ဘွဲ့ တွေကိုတော့ သမ္မတကိုယ်တိုင် ချီးမြင့်တာ။သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ်ကတော့ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်က ပေးပါတယ်။ ကကနကောင်စီအမိန့်နဲ့ပါ”ဟု ဗိုလ်ချုပ်ဇော်မင်းထွန်းက ရှင်းပြသည်။
ထို့ပြင် ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၂၀ ခုနှစ်အတွက် တပ်မတော်ဆိုင်ရာ စွမ်းရည်သတ္တိဘွဲ့ ဖြစ်သည့် သီဟသူရ ဘွဲ့ရရှိသူ အမှတ် (၅၆၄) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး အေးမင်းအောင်၊ သူရဘွဲ့ရရှိသည့် အမှတ်(၅၆၄) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဗိုလ်မှူး ရန်နိုင်ဦး၊ စစ်တက္ကသိုလ်မှ ဗိုလ်ကြီး ဇော်ဦးလွင်နှင့် အမှတ်(၅၆၄) ခြေမြန်တပ်ရင်းမှ ဒုတိယ အရာခံဗိုလ်ထွန်းဝေ(ကျဆုံး) ကိုယ်စား ဇနီး ဒေါ်အသန်းတို့ကိုလည်း ဘွဲ့ တံဆိပ်များ သမ္မတက ယမန်နေ့က ပေးအပ်ခဲ့သည်။
သီဟသူရနှင့် သူရဘွဲ့ ရရှိခဲ့သူများသည် ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ မတ်လက ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်၊ ဗုဒ္ဓေါကျေးရွာအနီး တိုက်ပွဲများတွင် AA တပ်ဖွဲ့၏ နာရီပေါင်း ၃၆၀ ခန့်ကြာအောင် ပိတ်ဆို့ခံထားရသည့်ကြားမှာ ကြံ့ကြံ့ခံပြီး ပြန်လည် တိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့သဖြင့် ယခုလို ဆုတံဆိပ် ဘွဲ့ များ ရရှိခြင်း ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။
တပ်မတော်နှင့် AA တို့ကြား တိုက်ပွဲပြင်းထန်ခဲ့သည့် နေရာ (ဓာတ်ပုံ – တပ်မတော် သတင်းမှန် ပြန်ကြားရေးအဖွဲ့)
ဒုဗိုလ်မှူးကြီး အေးမင်းအောင်တို့ တပ်ရင်းသည် ရသေ့တောင် ရှေ့တန်းစခန်းမှ အပြန် ဗုဒ္ဓေါကျေးရွာအနီးတွင် AA အဖွဲ့ များ စုဖွဲ့ နေသည့် သတင်းကြောင့် နယ်မြေ ရှင်းလင်းစဉ် ပိတ်ဆို့တိုက်ခိုက်ခံရပြီးနောက်ပိုင်း တပ်မတော်က လေယာဉ်၊ ရဟတ် ယာဉ်များနှင့်ပါ စစ်ကူပေးခဲ့ရသည်ဟု သိရသည်။
“ဖြစ်တဲ့အချိန်မှာ ရန်သူ့အင်အားက တော်တော်လေး များတယ်။ များတဲ့အတွက် တပ်မတော်စစ်ကြောင်းက အဝိုင်းခံလိုက် ရတယ်။ အဝိုင်းခံလိုက်ရတဲ့ အချိန်က နာရီပေါင်း ၃၆၀ ကြာတယ်။ ဒုတိယ ဗိုလ်မှူးကြီး ဦးဆောင်တဲ့ အဖွဲ့ပေါ့။ နာရီပေါင်း ၃၆၀ ကြာအောင် သူအခြေပြုနေတဲ့ နေရာကို ကြံ့ကြံ့ခံပြီး တိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့် AA ဘက်က ပုဏ္ဍာကျွန်းတို့ ယိုး တရုတ်တို့ကို နှောက်ယှက်မယ့် အစီအစဉ်တွေလည်း ပျက်သွားတယ်”ဟု ဗိုလ်ချုပ် ဇော်မင်းထွန်းက ပြောသည်။
ယင်းတိုက်ပွဲ မဖြစ်ပွားမီ ကျောက်တော်မြို့နယ်နှင့် ပိုမိုနီးစပ်သည့် ပုဏ္ဍားကျွန်းမြို့နယ်၊ ယိုးတရုတ်ရွာရှိ ရဲကင်းစခန်းတခုကို AA က ဝင်ရောက် စီးနင်းတိုက်ခိုက်ခဲ့ပြီး ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင် ၉ ဦး ကျဆုံးသွားခဲ့သည်။
တပ်မတော်နှင့် AA တို့သည် ၂၀၁၈ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာမှစ၍ ၂၀၂၀ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလ မတိုင်မီအထိ ရခိုင်ပြည်နယ် မြောက် ပိုင်းနှင့် ချင်းပြည်နယ် တောင်ပိုင်း၊ ပလက်ဝမြို့နယ်တို့တွင် တိုက်ပွဲများ ပြင်းပြင်းထန်ထန် ဖြစ်ပွားခဲ့သည်။
သို့သော် ၂၀၂၀ ရွေးကောက်ပွဲ ကျင်းပမှုကို ရခိုင်ပြည်နယ်ရှိ တိုက်ပွဲ ပြင်းထန်နေသည့် နေရာများ ချန်ထားခဲ့သည့်အခါ AA အဖွဲ့နှင့် တပ်မတော်တို့ကြား တိုက်ပွဲများ သိသိသာသာ လျော့နည်းသွားခဲ့သည်။
ယမန်နေ့က မနက်ပိုင်းက နိုင်ငံတော်သမ္မတအိမ်တော်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည့်အခမ်းအနားတွင် သီဟသူရဘွဲ့ ရရှိသူ ၁ ဦး၊ သူရ ဘွဲ့ရရှိသူ ၃ ဦး၊ ဇေယျကျော်ထင်ဘွဲ့ရရှိသူ ၁၁ ဦးတို့ကို နိုင်ငံတော်သမ္မတကိုယ်တိုင် ချီးမြှင့်အပ်နှင်းခဲ့သည်။
ယမန်နေ့က ညနေပိုင်းက တပ်မတော်က ပြုလုပ်သည့် အခမ်းအနားတွင် သူရဲကောင်းမှတ်တမ်းဝင်တံဆိပ်ရရှိသူ ၉ ဦးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်ရရှိသူ ၁ ဦးတို့ကို ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်က ဂုဏ်ပြု ချီးမြင့်ခဲ့သည်။
အခြား တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ သူရဲကောင်းလက်မှတ်ရရှိသူ ၅၆ ဦးနှင့် တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်ရရှိသူ ၁၀၃ ဦးတို့ကိုလည်း တိုင်း စစ်ဌာနချုပ်အသီးသီး၌ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် ကိုယ်စား သက်ဆိုင်ရာ တိုင်းမှူးများက ချီးမြှင့်မည်ဟု သိရသည်။
တပ်မတော်တွင် စွမ်းရည်သတ္တိဆိုင်ရာ ဂုဏ်ထူးဆောင်ဘွဲ့တံဆိပ်နှင့် လက်မှတ် ရရှိသူ စုစုပေါင်းမှာ ၂၀၂၀ ခုနှစ် ဇန်နဝါ ရီလအထိ အောင်ဆန်း သူရိယဘွဲ့ ရရှိသူ ၆ ဦး၊ သီဟသူရ ဘွဲ့ရရှိသူ ၅၀ ဦး၊ သူရဘွဲ့ ရရှိသူ ၅၄၅ ဦး၊ သီဟဗလတံဆိပ် ရရှိသူ ၆ ဦး ၊ သူရဲကောင်း မှတ်တမ်းဝင် တံဆိပ်ရရှိသူ ၃၈၇၁ ဦး၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်၏ သူရဲကောင်း လက်မှတ်ရရှိသူ ၃၂၈၄ ဦး၊ တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်၏ ဂုဏ်ထူးဆောင်လက်မှတ်ရရှိသူ ၁၈၂၆ ဦး ရှိပြီ ဖြစ်သည်။